I-Trivia - World Tourism Portal
Isigodlo saseMysore sinezicabha ezibaziweyo eziyinkimbinkimbi ze-rosewood kanye nophahla ezinye zinomsebenzi ohlotshiswe ngezinyo lendlovu, izithombe zemabula, ukuqoqwa kwamabhasikiti nemidwebo yamalungu omndeni wakudala wasebukhosini.
Kusukela ngawo-1960 uKourou waziwa kakhulu ngeGuiana Space Center.
Okuchazwe kahle kakhulu njenge "ibutho eliqaphile", okuwukuphela kombono onengqondo eStung Treng ukubuka ukushona kwelanga nokuphakama phezu komhlaba.
Isonto elincane leBoyana lekhulu le-14 eSofia liqukethe imidwebo egciniwe egcinwe kahle futhi inensimu yalo kuhlu lwamagugu omhlaba e-UNESCO.
E-Cologne ungavakashela umnyuziyamu we-chocolate.
Ngaphezu kwemingcele phakathi kwamazwe afanele, kungahle kube nemingcele noma izindawo zokulawula ngaphakathi kwalokho okungathathwa njengezwe elilodwa.
Ezinye izazi zesayensi yokwakheka komhlaba zikholelwa ukuthi i-Kata Tjuta kanye kungenzeka ukuthi yayiyi-monolith eyedlula kakhulu i-Uluru ngosayizi, kodwa ukuthi yakhukhula yaba ngamatshe amaningi ahlukene edwala.
IKuta sekuyisikhathi eside iyisiteshi esidumile kumzila we-Banana Pancake Trail ohamba phambili ojikijela eSouth East Asia.
INational Steinbeck Center eSalinas inemibukiso ngomlobi uJohn Steinbeck, ngomsebenzi wakhe, nangempilo eCalifornia Coast.
Izimpondo zikaMoi Avenue eMombasa, zakhiwa ngo-1956 ukwamukela iPrincess Margaret, eyayivakashile.
IWoodstock (Ontario) yaziwa njengeDairy Capital yaseCanada futhi izikhuthaza njenge- “The Friendly City”.
Izikhulumi zesiNgisi zivame ukuthola konke okuningi mayelana nokubhalwa okunzima kokubhalwa kwesiHungary, kufaka phakathi imisindo eminingi engajwayelekile kanye nohlelo lolimi oluhlanganisayo.
ICalcium carbonate (eyaziwa nangokuthi i-travertine) ne-limestone inika uPamukkale ubumhlophe bayo futhi yakha amachibi.
Esikhungweni i-Amoskeag Fishways Learning and Visitors Center eManchester, eNew Hampshire ungahlola uMfula iMerrimack ngezindlela eziningi.
INaypyidaw kwakuyiprojekthi yokwakha eyayiyimfihlo yombutho wezempi owawubusa kuma-2000s okuqala.
I-Old Sears Tower eseFar West Side yaseChicago yake yaba yisakhiwo esikhulu kunazo zonke kwezohwebo emhlabeni.
U-Annan uqhosha ngamagugu okukhiqizwa kwemishini yeWWI, ngokwesibonelo iDiabol's Porridge yasungulwa lapha.
IConcepción ineminyuziyamu emithathu ngayinye emelela inkathi ehlukile yomlando weParaguay.
Ngeke uvunyelwe ukungena eSeif Palace eKuwait City, noma kunjalo kusathakazelisa ukudlula futhi ubone izingadi ezinkulu zesigodlo.
IBonaire ine-diving esezingeni lomhlaba esezingeni lomhlaba, okuningi kulula, ngakho-ke ilungele kahle abaqalayo, noma yabatshuzi abanolwazi abafuna ukuphumula ukudilika ngokuzimela.
IMachines de l'Ile eNantes ngumbukiso omnandi wezilwane ezisebenza ngomshini kubandakanya neNdlovu Enkulu ongagibela kuyo.
Ukukhuphuka kwezimpophoma zoMfula iDunn e-Ocho Rios ochungechungeni lwabantu kungenye yezindawo eziheha kakhulu eJamaica.
Yize kungokukhethekile kwasendaweni kwe-Yurihonjo, amakhekhe erayisi kiritanko nezinhlanzi zehatahata zinikezwa kuphela ezindaweni zokudlela ezimbalwa eziseduze nedolobha, noma zingathengwa ezitolo eziningi zezipho.
IDaugavpils inamanzi amaningi kunamanye amadolobha aseLatvia; kunamachibi ayi-15, imifula engu-8 nemifudlana eminingi indawo yayo.
Ngaphambi kokwamukelwa kabanzi kohambo lwasemoyeni, ukuwela olwandle oludlulayo ngokwesidingo kuncike emikhunjini ehamba olwandle oluphakeme.
Yenziwe ngamatshe abomvu wedwala, iGrand Junction iyingxenye ebalulekile yezwe lewayini laseColorado.
Imnyuziyamu yokuphisa utshwala eSaint-Denis inikezelwe endaweni yonke yaseReunion uBière Dodo.
Njengomuzi omusha ngokwedlulele, iMurmansk inezinto ezimbalwa ongazibona ngaphandle kwesithombe esikhulu sika "Alyosha".
ISoekarno-Hatta International Airport inenkundla yayo yegalofu enemigodi engu-18.
UGijón uhlala ebheke olwandle, oluhlala lukhona ku-geography nemisebenzi yalo.
IBamberg kuthiwa yakhiwe emagqumeni ayisikhombisa ngakho-ke kwesinye isikhathi izibiza nge- “Franconian Rome”.
Njengokuvakasha kwezemvelo, ezokuvakasha zigxila kwezokuvakasha ezinomthelela ophansi futhi zinika amandla imiphakathi yasendaweni, kokuphilisana nakwezomnotho.
Ihholo ledolobha laseSantiago de Cuba kulapho uCastro amemezela khona ukunqoba ngo-1959.
Ukuhamba ngamabhasi weTransperth kumahhala enkabeni yePerth.
Umehluko ophawulekayo ukhona phakathi kwamafomu akhulunywayo nabhaliwe eSinhala.
I-Nasoteket eLund iqoqo lamakhala ekhaleni avela kumaSweden ahlukahlukene adumile.
Indawo yomlando iTrans-Allegheny Lunatic Asylum eseWeston, eNtshonalanga Virginia, iyisakhiwo sesibili esikhulu kunazo zonke esisikwe ngamatshe esandla emhlabeni.
Igama lesiNgisi lesiQhingi se-Easter liyisikhumbuzo sokutholwa kwalo kwaseYurophu ngumkhumbi wokuhlola waseDashi ngeSonto lePhasika ngo-1722.
Lezi zindawo ezake zabizwa nge- “Garden City of India” kanye ne- “Pensioner's Paradise”, azisebenzi eBangalore yanamuhla.
I-Dún Aonghasa e-Inis Mór iyinqaba yomlando eyayiqala ngonyaka ka-1000 BC, eyayimi onqenqemeni lwedwala elingamamitha ayi-100 eliwele ngqo e-Atlantic Ocean.
Ngaphezu kwesine-nesihlanu somlando wendlela engu-66 e-USA kuhlala kushukumiseka (yize kungenjalo kuhlale kumakwe kahle) njengeqoqo lemigwaqo emikhulu yemigwaqo nemigwaqo yasendaweni.
IPalazzo Regio eCagliari kwakuyindawo yokuhlala yabamele abasebukhosini phakathi nekhulu le-14.
Izilwandle ezishubile ezigudle ugu oluseningizimu yeYorke peninsula zidale imithambo yemikhumbi eminingi, yingakho le ndawo inenqwaba yezibane.
IBir yidolobha elincane elinezintaba enyakatho neHyachal Pradesh enomphakathi omkhulu, omiswe kahle waseTibetan.
UMoyobamba waziwa ngeDolobha lama-Orchids.
I-Wood Buffalo National Park iyidamu ledamu elikhulu kakhulu emhlabeni.
Inhloko-dolobha nesikhungo sokuphatha iGreenland, iNuuk inezakhamizi ezingaba ngu-15000 okuyisigamu sabantu abahlala kulesi siqhingi.
Cishe izinsuku ezingamashumi amabili ngoMeyi 1945 lokho obekuthiwa kunguhulumeni wokugcina weNazi Germany kwahlala eFlensburg.
ILemnos inamabhishi angaba yikhulu ahlakazekile esiqhingini sonke.
IGateway Mall eSalt Lake City yakhiwa njengengxenye yokuthuthuka kanzima kwedolobha ekuholeleni kuma-Olimpiki Wasebusika ka-2002.
UMnyuziyamu kaZwelonke wase-Antigua naseBarbuda ugcinwe e-Old Court House yaseSaint John.
ILes Almadies eseDakar iyisicephu esentshonalanga kakhulu kwezwekazi lase-Afrika.
U-Alivaria Brewery, omdala kunabo bonke eMinsk futhi omkhulu kunabo bonke eBelarus, angavakashelwa ngokuvakasha okubandakanya nokunambitha ubhiya.
Wakhiwa njengombhoshongo onogada, iTour des Sorciers (iWitches 'tower) eSion yabe isisetshenziselwa ukubuza imibuzo yabathakathi ababehlushwa lapho babethola khona igama.
Igalari yeWinnipeg Art igalari yakudala yaseNtshonalanga Canada, futhi ifaka iManitoban, iCanada, nabaculi bamazwe aphesheya kanye neqoqo elikhulu le-Inuit Art.
IPlaza Independentencia, isikhungo esikhulu sedolobha yindawo enhle yokuqala ukuhlola idolobha laseMendoza.
ICarolina Ibhishi akuyona nje idolobha elijwayelekile lolwandle-futhi ingenye yezindawo ezimbalwa ongabona kuzo izindiza ezindizayo zeVenus endle.
Ukuhamba nge-Space kunomlando omude kangangokuba amazwe amaningi amakhulu emhlabeni abambe iqhaza kuwo, manje okuboniswa eminyuziyamu yasendaweni.
ITaichung's Pao Jiue Temple yaseTaichung ifaka “iBuddhigha eNkulu” yegolide.
Imnyuziyamu yase-Æbelholt Kloster eHillerød inemibukiso ngomlando wezokwelapha we-oda lase-Augustinian, kufaka phakathi ingadi enamakhambi ezokwelapha, nezinye izingono ezingama-300 ezibukwayo.
Imigwaqo yaseBrazil ingahluka kakhulu emadolobheni amaningi, futhi ngisho nangaphakathi, ngokwekhwalithi.
I-Artur Rubinstein's Lodz Philharmonic iyiphilharmonic yesibili yakudala ePoland.
Idolobhana laseShaker Village laseMnandi ngaseHarrodsburg liwumphakathi wamaShaker abuyiselwe ngobukhulu eMelika, enezakhiwo ezingama-34 ezibuyiselwe namahektare angama-3,000 ezilimo ezigciniwe.
IZambia inezilimi eziyi-16 ezisemthethweni.
IBogor Botanical Gardens yasungulwa ngonyaka we-1811 njengengadi yangasese yeSir Stamford Raffles, kamuva owasungula iSwitzerland.
Manje sekuyidolobha elinabantu abangaphezu kuka-700,000 nendawo evakashele izivakashi eCaribbean, iCancún yayingekho ngaphambi kweminyaka yo-1970.
Isiqhingi saseSjälö eduzane naseNagu Kyrkbacken, esake saba nethimba labanochoko, elabe liyisibhedlela sengqondo, manje seliyisikhungo sokucwaninga futhi semukela izivakashi.
Ukusakazeka komgwaqo olwandle nokubheka ugu lolwandle, amaNarragansett Towers konke okusele eNarragansett Pier Casino.
Uma iTokyo inhlokodolobha yaseJapan, umuntu angabiza u-Osaka ngokuthi yi-anti-capital yayo.
Izibiliboco zasendaweni eHalifax zibandakanya ukubonwa kweHalifax, i-hodge podge, i-blueberry grunt ne-pepperoni ejulile ethosiwe.
ESighișoara ungavakashela indlu lapho uVlad Țepeș “Umthengisi” (aka “Dracula”) azalelwa khona.
Ngesikhathi se-khareef (i-monsoon) ehlobo kanye noMkhosi weSalalah waminyaka yonke, izivakashi ziya esifundeni seSalah zibalekela amazinga okushisa avuthayo kwenye indawo ethafeni lase-Arabia.
E-Invercargill idolobha lasekhaya lomshayeli wezithuthuthu osibeka amarekhodi uBurt Munro, kuneminyuziyamu eminingi yokugibela.
UMasipala weLac uwukuphela komzimba wamanzi eJaoundé nenye indawo yokuqhela kulo msindo wedolobha.
I-Bad Nauheim iyidolobha lase-spa eHesse okuyisimangalo saso esidumile ukuthi u-Elvis Presley wayehlala lapho ngesikhathi sempi.
Kunezakhiwo eziningi ze-Art Nouveau eNancy.
UMbuso WamaPutukezi wawungomunye wemibuso eyayihlala isikhathi eside kakhulu yobukoloni.
Lapho sekuyindawo yokuzingela ubukhosi baseNepali, iParsa Wildlife Reserve ngaphandle kweBirgunj manje isiyindawo evikelekile nepaki yezwe.
IParque de las Iguanas eGuayaquil iyikhaya lamakhulu ama-iguanas angabonakali.
Kusuka ekubonweni komakhiwo wombhoshongo wePuijo eKuopio unombono omangalisa ngaphezulu kwe-lakelands engomakhelwane.
Indawo yaseWolf Creek ski eduzane nasePagosa Springs ineqhwa eliningi kakhulu eColorado ngokwesilinganiso esingamasentimitha angama-465 ngonyaka.
I-National Museum of Natural History eLuanda yenza umsebenzi omuhle kakhulu wokubonisa inani elikhulu lezinto eziphilayo ezahlala futhi zakha i-Angola yanamuhla.
Inkonzo yesitimela sokuqala esinejubane eliphezulu kwakunguShinkansen (uShinkansen 0 uchungechunge wesitimela), eqala inkonzo ngo-1964.
Amasellar eKaunas City Hall agcina imnyuziyamu yedolobha yobumba.
Amagagasi ashaya ogwini lwaseStrahan, eTasmania kungenzeka ukuthi ahamba yonke indlela esuka ePatagonia eSouth America.
Ubuchwepheshe beCulinary kuHeligoland buhlanganisa ama-lobster, izindlanzana zomkhuhlane, iplathi, izindlawu, i-herring kanye nezinye izinhlobo zokudla kwasolwandle kwasendaweni.
Abantu bendawo asebekhulile, ngesiPutukezi, idolobha laseRecife livame ukubizwa ngalo nge-athikili, njenge “The Reef”.
Abahambi besikhathi eside bangathola ukushaqeka kwesiko lapho ekugcineni bebuyele ekhaya.
Yize ivame ukugconwa njengengenamlando, ihabhu elisebenza ngokushesha le-Shenzhen linemizana yendabuko elondolozwe kahle.
Ingxenye yaseRussia yeSaimaa Canal iqashiswa yiFinland ngokufanayo nokuqashwa kwangaphambilini kwe-US kwePanama Canal Zone.
Isiqubulo seBoring, Oregon "yindawo ethokozisa kakhulu yokuhlala."
I-malecon eSan Carlos ingabonakala cishe imizuzu eyi-10, kepha ungakwazi ukujabulela intokozo yesimo sezulu esishisayo lapho kwelanga futhi ukukhanya kwelanga kuyabonakala.
Uhambo olusuka ezweni lonke usuka eBuenos Aires uye eMachu Picchu unqamula izintaba ezimangazayo nogwadule olukhulu.
Isimo samaqhwa amangalisayo, izintaba ezibomvu nemihume, iDanxiashan ayisaziwa kakhulu kubavakashi bamazwe omhlaba.
Into ongayithenga eM Mae Salong yitiye elihle kakhulu lasendaweni elinywe emasimini nxazonke.
Yasungulwa ngonyaka ka-1635 njengebutho lamasosha ngesikhathi saseSpain, iFort Pilar eZamboanga isebenza njengendawo yanamuhla evulekile.
IPrague idolobha lamabhuloho, amakhemisi, imibhoshongo enezimpondo zegolide kanye namachibi esonto, okuke kwabonwa ebusweni komfula iVltava ogcwaliswe nge-swan iminyaka engaphezulu kweshumi
Isiqhingi esincane saseXiaoputuo sikhulu ngokwanele ukuba sibambe ithempeli likaBuddha elakhelwe phezu kwaso.
IBossier City, kanye neShreveport, ikhaya lesifunda lokudlala imidlalo esifundeni se-Ark-La-Tex.
IWhitakatane ingelinye lamadolobha anelanga kakhulu eNew Zealand.
Isiphethu esisePiazza di Spagna eRoma sigubha isikebhe esake saphelela esigcawini lapho umfula iTiber ugcwala.
IBhaktapur Durbar Square kwakuyisihlalo sobukhosi saseNepal ngaphambi kuka-1769.
UMnyuziyamu Wezempi waseSultan's Armed Forces eMuscat ubekwe esakhiweni esakhiwa ngo-1845 njengekhaya lasebukhosini ehlobo.
Ingaphandle eligcinwe kahle leBodiam Castle ngaphandle kwaseRobertsbridge selisetshenzisiwe kumafilimu amaningi adumile, kubandakanya nokufuna kukaMonty Python ngeGrail Engcwele.
ISenhime Shrine eHimeji ukuphela kwesakhiwo eJapan esihlotshaniswa nenqaba.
ITupelo idolobha laseNortheast Mississippi elaziwa kangcono ngokuba yindawo yokuzalwa ka-Elvis Presley.
IPotosí cishe ngamamitha ayi-4,000 ngaphezu kolwandle, ingelinye lamadolobha amakhulu kakhulu emhlabeni
ILlotja de la Seda (ukushintshana kwesilika) eValencia kubhekwa njengesinye sezakhiwo ezibaluleke kakhulu zeGothic eYurophu.
Umnyuziyamu weFisheries and Maritime e-Esbjerg wethula ugu lolwandle lwaseNyakatho zombili kusukela endaweni yemvelo neyomnotho.
ICape Coast Castle ingelinye lamafulethi amaningi e-UNESCO World Heritage Forces ogwini oluseningizimu yeGhana.
ICanadaan Pacific neCanada National Railways iyahlangana ePortage la Prairie, okwenza kube yindawo enhle yokuthi ama-aficionados wesitimela abuke izitimela.
Njengoba uMbuso WaseRoma uqhamuka e-Italy futhi ubambelele kule ndima isikhathi eside kakhulu, izinsalela eziningi zitholakala lapho naphaya kwelaseMedithera.
I-Bodaiji Temple eMount Osore yakhiwa ngokuzungeza inqwaba yezintaba-mlilo eziqubuka kuzo zonke izinhlobo zemithunzi engeyona eyemvelo kusuka ku-canary ophuzi kuya ebomvu kwegazi.
Abavakashi abangama-400 kuphela abavunyelwe ukuvakashela i-Lord Howe Island nganoma yisiphi isikhathi.
Isikhumulo sezindiza i-McCarran International eLas Vegas singenye yezikhumulo zezindiza ezimbalwa emhlabeni ukuba nemishini yokudonsa kuwo.
Izakhiwo Zikahulumeni Omdala eWellington isakhiwo esikhulu kunazo zonke sokhuni eSouthern Hemisphere futhi esesibili ngobukhulu emhlabeni.
I-India inezinkomo eziningi ukwedlula noma yiliphi elinye izwe emhlabeni, kanti ubisi nemikhiqizo yalo yokutholwa isetshenziswa ezinhlobonhlobo zezitsha zokudla zamaNdiya, iziphuzo namalayisi.
I-El Centro idolobha elikhulu kunawo wonke laseMelika ukuba lilale ngokuphelele ngaphansi kolwandle.
I-crypt yaseVilnius Cathedral ikhombisa isigaba seVilnius kuyo yonke le minyaka, kufanelekile ukubona.
Idolobha elihleliwe, iChandigarh lakhiwa njengedolobha le- "Sun, Space and Verdure", ukufeza imisebenzi eyisisekelo yokusebenza, ukuhlala, nokunakekela umzimba nomoya.
IVen yaziwa kangcono njengendawo yokuhlola izinkanyezi ye-Renaissance-era eyakhiwa iTycho Brahe.
Kulula ukuphazanyiswa yi-Times yaseNew York; ngisho nakuleli dolobha lama-skyscrapers amakhulu nezimpawu zomhlaba odumile, ukukhanya kwelanga Lesifunda Seshashalazi kudlula konke okuzungezile.
Ngenkathi iKuala Lumpur ingamahlathi kakhonkolo amaningi uma iqhathaniswa nezinye izingxenye zezwe, kusenzima ukubhekisisa imvelo.
IBottle House eGanja yakhiwa ngamabhodlela angama-48,000 futhi ukuhlonipha amasosha eMpi Yezwe II angazange abuye ekhaya.
Imnyuziyamu Yezempi yaseGhana e-Kumasi ifaka imininingwane eminingi nezinto zobuciko ezihlobene neMpi yaseBrithani-Asante.
Umbukiso ogqamile weMnyuziyamu weBuryatia Umlando e-Ulan Ude uyincwadi enezithombe ezingasho njalo kusuka ngekhulu le-17 ngemithi yaseTibetan
E-St. Louis ungavakashela ama-World Chess Hall of Fame.
ICuc Phuong National Park iyipaki lesizwe esikhulu kunazo zonke eVietnam futhi enye yezindawo ezibaluleke kakhulu zezinto eziphilayo kuleli.
Kungabizwa ngokuthi "imithetho yase-Australia" ibhola, kepha idolobha elibusa umdlalo iMelbourne.
Ukugula kwe-altitude kuyingozi enkulu yokwenyuka izintaba eziphakeme, futhi ingozi elinganiselayo yemidlalo yezintaba nalapho indiza ingena edolobheni eliphakeme.
Okukhethekile kweChorley yiChorley Cake, ikhekhe elincanyana elimnandi, elenziwe ngama-currants khekhe elifushane.
I-Asturian Railway Museum eseGijón ibonisa amasheya ahamba phambili kusukela ezinsukwini zezimboni zakwa-Asturias zezimayini zamalahle nokukhiqizwa kwensimbi.
Ubungcweti obukhethekile beTheku yi-bunny chow, ikota yesinkwa ebilisiwe futhi lugcwele i-curry oyithandayo.
IThempeli laseNan Tien eWollongong liyithempeli elikhulu kunawo wonke amaBuddha eSouthern Hemisphere.
KuKurashiki ungavakashela imnyuziyamu ye-jean kanye nomnyuziyamu wokufanisa wesikole.
IPolson isemaphethelweni aseningizimu yeFlathead Lake, ichibi lamanzi lemvelo elikhulu kunawo wonke laseMelika elisentshonalanga neMississippi.
Ngaphandle kweBaku ungabona amasimu wamaphampu wamafutha adumile ukusuka lapho kuvulwa khona isithombe seJames Bond Umhlaba awukwanele.
INaarden idolobha elincane elizungezwe izinqaba ezinkulu zekhulu le-17, phakathi kwezindawo ezigcinwe kahle kunazo zonke eYurophu.
IRoyal Regalia Museum eBandar Seri Begawan ibonisa izesekeli zasebukhosini ezisetshenziswe ngenkathi kubhalwa amazulu, kanye nokushicilelwa okuthile, kanye nezipho ezamukelwe yiSultan.
Isiteshi saseMcMurdo yisiteshi esinezindawo eziningi e-Antarctic ehlobo nokuyinto eyisithuthi sokuhamba samalungu omphakathi wesayensi ezwekazini eliseningizimu.
Ihholo ledolobha lase-Aarhus libhekwa njengenye yezinto ezigqamile zokwakhiwa kweDenmark.
ESikhumbuzweni Sokuvuselela eTimisoara ungafunda ngezinsuku eziyisikhombisa ezimfushane lapho iRomania yachitha uhulumeni wayo wobukhomanisi ngo-1989.
IYangshuo ithandwa indawo yayo emangalisayo ye-karst, izintaba ezinhle, imifula, imihume, kanye namathempeli kanye nezindawo zokudlela ezinhle ngemuva.
Isimo sezulu seSalt Lake City sinesizini enkulu kakhulu.
Yize ukubhuka izindiza kusenesikhathi kuwumqondo omuhle, akukuqinisekisi imali eshibhile.
IToulouse Capitale iyisakhiwo esihle kakhulu sobumba obomvu ngesitayela seNeoclassical, siyibeka phezulu esigcawini esikhulu sabantu abahamba ngezinyawo i-Place du Capitole.
Umhubhe wesitimela waseMaliguda usenyakatho neKoraput ungumhubhe omkhulu wobubanzi obukhulu eNdiya.
Lapho esetshenziswa yimikhumbi yangaphandle ukuhamba ngomfula iSenegal umgwaqo wokukhanya wegandi uqhubeka nokugcinwa kubadobi bendawo kanye nabathandi bendlu yomoya.
EHavana iMalecón kulapho abantu bendawo beza ephathini ngezimpelasonto.
I-Württembergisches Landesmuseum eStuttgart iyisizukulwane esiqondile seqoqo lezinto zakudala zasendaweni ezakhiwa ngonyaka we-1862 yiNkosi uWilhelm I waseWürttemberg.
I-cassaisse cuisine isuselwa ekudleni kwasolwandle futhi yaziswa kakhulu esifundeni sonke
I-Forte dos Reis Magos eNatal kungenzeka ukuthi ibaluleke kunazo zonke izithiyo eBrazil zokuvikela ngesikhathi sobukoloni.
Izinombolo 1 kuye ku-4 zinezinhlobo ezintathu zobulili e-Icelandic, kuya ngokuthi inombolo inamathele kwelezihlobo zesilisa, isifazane, noma igama elingabonakali.
I-didjeridu idabuka e-Arnhem Land, futhi le ndawo idume umhlaba wonke ngobuciko bayo obuhlukile be-Aborigine
I-Trans-Siberian Railway ingumgogodla wenethiwekhi yezitimela zaseRussia nokuxhumana phakathi kwamanethiwekhi wesitimela wase-Asia nase-Europe.
Isungulwe nguThomas Jefferson, iNyuvesi yaseVirginia eCharlottesville ndawonye nendlu yakhe yokuhlala ebhalwe njengendawo yamagugu emhlabeni.
IChiesa dei Catalani yangekhulu le-12 ingenye yezakhiwo ezimbalwa ezindala eMessina ezisinde kuzamazama komhlaba ngo-1908.
I-Edison-Soo Hydro-Electric Power House eSault Sainte Marie (Michigan) iyisitshini sikagesi eside kunazo zonke esisebenza ngogesi.
Iminyaka engu-58, uMannheim wasebenza njengendawo yokuhlala ebukhosini, wanika uSchiller, uSfundo, uGoethe noMozart ikhaya isikhashana.
UDundee wayevame ukuba yidolobha lezimboni elinobudlova, elidume ngokuba namaJ's amathathu jute, jam nobuntatheli.
Kuchazwa ngokuthi "ukuhlangana kwamaphupho namaqiniso", yonke intshi engaphezulu yethempeli laseLingaraja eBhubaneswar imbozwe ngemidwebo ebanzi.
Umsebenzi we-enamel wegolide nowemnyama owenziwe ngabaklami beToledo uyaziwa kulo lonke elaseSpain.
IBadagry engaphandle kweLagos yasungulwa njengezigqila zezigqila futhi yaziwa nangokuthi i- “Point of No Return
Ifulegi lase-Ashgabat laqedwa ukwenziwa ifulegi elikhulu kunawo wonke emhlabeni, futhi ukuphakama kwamamitha ayi-133 (amamitha angama-436) namanje kungolunye olude kakhulu.
Kulezi zinsuku ipaki, umzila weHoward Watson eSarnia ngumgwaqo owedlule wesitimela odlula lapho kuhlanganiswa izindawo zasemadolobheni nasezindaweni zasemakhaya.
IGuo Zhuang ingadi eHangzhou ingenye yobungcweti bengadi yaseJiangnan (isifunda esingaphansi koMfula iYangtze) sibonga indawo engenakuqhathaniswa nendawo enengadi ephethwe kahle.
I-Tasmanian Museum and Art Gallery eHobart inombukiso ojabulisayo ongapheli womlando wemvelo wase-Antarctic.
ISint-Truiden isenkabeni yesifunda esikhiqiza izithelo zaseBelgium, iHaspengouw (yesiFulentshi: iHesbaye), futhi idume ngamapheya ayo, ama-aphula (iJonagold), namakheli amnandi.
Amanzi avikelwe eGlacier Bay ebb futhi ageleza kanye namagagasi amakhulu esifunda, angashintsha kube ngamamitha angama-25 ngesikhathi samahora ayisithupha.
I-Big Mosque yaseChennai iyisakhiwo esihle samagrey grey, esakhiwe ngaphandle kwensimbi nokhuni.
Njalo ngo-Ephreli kugujwa iKoryo Mountain Azalea festival e-Incheon, futhi abantu abaningi benyuka intaba bayobona ukuqhuma kwe-azaleas.
UTórshavn wasungulwa ngekhulu le-10 futhi waqanjwa ngegama likaThor, unkulunkulu wokuduma nemibani kuNthse mythology.
Isonto elikhulu kunazo zonke nelinye elidala kunawo wonke eBratislava, iSt. Martin's Cathedral kwakuyisonto lamakhosi ambalwa aseHungary.
UJerash akazange angcwatshwe yintaba-mlilo, noma kunjalo kwesinye isikhathi kubhekiselwa kuzo njenge “Pompeii yase-Middle East”.
Idaho Falls ifaka iMyuziyamu yase-Idaho, enikezwe umlando wezwe futhi yathola imibukiso eminingi yokuhamba edumile.
ICasablanca ingelinye lamadolobha amabili aseMorocco anenethiwekhi yetrama.
AmaGrikhi abheka iThessaloniki njengedolobha elinomusa - lokhu kubhekisa ekusetshenzisweni okuhle kwasendaweni nasemigwaqweni eshibhile futhi ejabule ye-ouzo kunokuba udayise ama-cuisine noma uhla lokudlela lwangaphandle.
Imikhosi yamaNauryz eSymkent ngasekupheleni kukaMashi ingenye yezindawo ezinkulu kunazo zonke eKazakhstan.
Isitsha sikazwelonke saseGuyana yi-pepperpot, isitshulu esenziwe ngokuphekiwe senyama yengulube (noma okunye ukudla), upelepele obomvu (i-capsicum), isinamoni nomdanso.
Esiqhingini sase-Ogasawara, esivame ukubizwa ngokuthi “yiGalapagos YaseMpumalanga”, izilwane nezitshalo ziye zaqhubeka nezinqubo ezihlukile zokuziphendukela kwemvelo njengoba lezi ziqhingi zingakaze zixhumane nezwekazi.
I-Fethiye cishe iyidolobha kuphela emhlabeni lapho uzothola ama-sarcophagus emigwaqweni.
Lapho uhambahamba eSt George's Cathedral e-Addis Ababa, uzobona abantu bethandaza eceleni kwezindonga, kodwa-ke akulindelekile ukuthi uthole indlela yokungena.
Yasungulwa ngaphambi kuka-1378, u-Einbecker Brauhaus ungenye yezindawo ezindala kakhulu ezisebenza ngokufuya emhlabeni.
I-Isle Royale iyindawo yokulondolozwa ehlane kuqala, indawo engcwele yalabo abafuna ukukubona ngokwesibili, nendawo yesithathu yokuvakasha.
IMontepulciano ithole ukuphawuleka ekusebenzeni njengendawo yamafilimu e-Twilight.
Ama-Tháp Đôi Cham Towers ngaphandle kweQuy Nhon yiyona imibhoshongo yeCham efinyeleleka kakhulu eVietnam.
ISerbia isebenzisa zombili izinhlamvu zezilimi zesiLatin nesiCyrillic, okuwukuphela kolimi lwesiSlavic ukwenza kanjalo.
I-El Camino Real yomlando ixhumanisa o-21 baseSpain baseCalifornia.
Izihlahla ezikhulukazi ezinamakhaza eqhweni eceleni koMfula i-Songhua eJilin zithathwa njengezinye zezimangaliso ezinkulu zemvelo ezine China.
UDolores Hidalgo wayeyisiqalo sokulwela inkululeko yaseMexico eMbusweni waseSpain, futhi leli dolobha lineminyuziyamu elihlobene nezigodlo eziningana.
Ukuhamba uzungeze iCathedrale Notre Dame eLe Havre uzobona umehluko omkhulu phakathi kwekhathalogu lekhulu le-15 nezakhiwo ezakhiwa ngo-1950 no-1960 ezizungezile.
Noma ungaze ungene esikhaleni ngokwakho, kunezindawo ezimbalwa ezihlobene nendawo emhlabeni.
Ambalwa amadolobha omhlaba anomlando ocebile njengaleyo Alexandria; amadolobha ambalwa abone izehlakalo ezinganekwane zomlando.
Imeyili yangaphambili ne-Eckerö yasendlini yangumkhuba omkhulu ngokweqile ukuthola lo muzi, njengoba yakhiwa njengophawu loMbuso WaseRussia emzileni omkhulu weposi oya eSweden.
Ukuqasha i-motorhome nokuhambahamba E-New Zealand kuyindlela ethandwayo neqabulayo yokubona izwe.
Imakethe eKisumu iyindawo yesibili evulekile emakethe enkulu kunazo zonke Kenya, nomunye wabadala.
IPlacentia yayiyidolobha laseFrance iNewfoundland ekuqaleni kwekhulu le-17.
I-California ayinayo cuisine echazwe kahle eyayo, kepha kunendawo yokudla ehluke kakhulu echazwa ngabantu bayo abokufika abavela kwizizinda ezahlukahlukene zezinhlanga.
I-Spa eBelgium yaziwa ngokuthi yi-spa "yasekuqaleni", okusho indawo lapho izivakashi zangena ukujabulela izinzuzo zezempilo nezempilo zamanzi nezindawo ezishisayo ikakhulukazi.
IRajabhakti Park e-Hua Hin yakhiwa ukuhlonipha amakhosi aseThailand edlule kusukela enkathini yeSukhothai kuya kwiRoyal House yaseKakri yamanje.
I-Pioneer Settlement eSwan Hill inika ukubheka emuva ezimpandeni ezimhlophe zase-Australia, kuqedile ngezindlu zekotela ezingama-1850, izinqola ezidonswa ngamahhashi nezikebhe zomfula.
Imnyuziyamu engenamkhawulo wamahhashi eFenelon Falls ingumnyuziyamu ogxile kwezokuhamba ngaphambi kuka-1914 nobuchwepheshe bokuqala bokusebenza kwemishini.
Izitsha ezenziwe ngamazambane, ezibizwa ngokuthi “isinkwa sesibili”, zivamile eBelarus.
I-Pokhara indawo ephezulu ye-yoga yaseNepal futhi kunezindlela ezingaphezu kweshumi nambili zokubuyiselwa kwe-yoga.
Indawo yaseVine City e-Atlanta ibambe amakhulukazi ama-US amakolishi ase-Afrika aseMelika kusukela emuva kweMpi Yombango.
Kusukela ekuqaleni kwekhulu le-16, ama-windmeru angenye yezimpawu ezaziwa kakhulu iMykonos.
IKeszthely inomnyuziyamu weBalaton owethula ukuthuthukiswa kwechibi, izimila kanye nezilwane zalo kanye nezinto ezingokomlando zezindawo ezizungezile.
I-Royal Oak iyikhaya likaDetroit Zoo, elaziwa njengenye yezindawo eziphambili ze-US
Yasungulwa ngo-1730, iSan Antonio de Areco iyaziqhenya ngesiko layo le-gaucho, futhi izivakashi zingabheka amadolobhana azungezile kanye namaphephabhuku.
Ukwenza i-scuba diving akudingeki ukuthi ubhukude noma ubenesimo esihle, kepha udinga ukuzizwa ukhululekile emanzini.
Ukuze ube nombono omuhle ngeGoli nezindawo ezizungezile, ubheke eLion Rock (obizwa nangokuthi yiSimba Hill) enyakatho yedolobha.
Isikhumbuzo se-Hands of Harmony eHomigot ngaphandle kwasePohang sisendaweni esempumalanga yeSouth Korea, futhi indawo edumile yokudubula izithombe zelanga liphuma ngeminwe yesandla.
Igama leHelmsdale lisuselwa kuNorse Hjalmundal, okusho ukuthi “iDale of Helmet”.
IHoror Hills eThane inabantu abaningi kakhulu izingwebu ngaphakathi India.
IParque Grande José Antonio Labordeta enkulu eZaragoza inezici ezinhle kakhulu, amalungiselelo nesitebhisi esimnandi somthombo.
Isakhiwo sethempeli laseWilcahuaín ngaphandle kweHuaraz alonakaliswa neze, sinikeze ithuba eliyingqayizivele lokubona isakhiwo esiphelele sangaphambi kukaColumbi EPeru.
ESimi Valley ungavakashela umtapo weRonald Reagan Library and Museum.
E-Greek cuisine salads (horiatiki salata) nemifino kudlala indima enkulu kakhulu kunakwamanye ama-cuisines aseMedithera.
I-Muzium Padi e-Alor Setar iyimnyuziyamu efundisa konke okudingeka ukwazi nge-paddy nelayisi.
UMbhoshongo kaMcCaig e-Oban kwakumelwe ube isithombe seColosseum eRoma, kodwa kuphela igobolondo eliyindilinga elaqedwa ekugcineni.
Ikhofi yaseTurkey, ekhonzwa izinkomishi ezincane, iqinile futhi imnandi, futhi ihluke kakhulu kunalokho okubizwa ngokuthi yi-coffee cofi yaseTurkey ethengiswa phesheya.
IThempeli laseGuan-Yue eQuanzhou linesithando esikhulu somlilo sokushisa iphepha le-joss, liba matasa kakhulu ngamaholide anjengeYuanxiao, lapho abantu befika bezoshisa iminikelo yabo.
IQuezon City ayinandawo eyodwa ebhekwa njengesikhungo sedolobha; yidolobha elinabantu abaningi, linezifunda eziphakathi nendawo kanye nezikhungo zezentengiso ezisakazeke ezindaweni ezahlukahlukene.
USibiu uye EzaseRomania Umphakathi omkhulu waseJalimane, futhi ngenxa yamanyathelo ohulumeni basekhaya, umuzwa wamaJalimane wale ndawo ugcinwe.
Ngaphandle kokungafani kwamagama, kukhona umehluko obalulekile phakathi kwePutukezi yaseYurophu neyaseBrazil.
Cishe konke mayelana neMashhad kuhlobana nendima yayo njengomuzi ocwengekileyo kunawo wonke e-Iran, negama lawo - ngokwempela: “indawo yokungcwaba umfelikazi”.
Esithangamini Sombhali Wezombukiso Wezombukiso Wezinguqulo Zombusazwe uChinchun ungafunda ngomlando womkhakha wama-movie waseChina.
I-Edmonton yindawo yokuzalwa yamaketanga amabili okudlela amakhulu eCanada: iBoston Pizza ne-Earl's.
ILe Jardin des Plantes eMontpellier yinsimu endala kakhulu yezolimo yaseFrance.
UPaarl unesikhumbuzo nangemnyuziyamu kulimi lwesiBhulu.
ISuquamish isho "indawo yamanzi anosawoti acacile" ngolimi lwesiNative Lushootseed, futhi bekulikhaya lokuqala labantu abangamaSuquamish kusukela ezikhathini zasendulo.
IManama inokuphila okumatasa kwasebusuku ngamazinga we-Gulf futhi iyisitha sama-Arabhu kanye nama-expats ahlala emazweni ase-Arab lapho utshwala buvinjelwe khona.
I-Asado, i-barbecue yase-Argentina, mhlawumbe isitsha esidumile kakhulu se-cuisine yase-Argentina.
Isendaweni ecishe ibe maphakathi nenyakatho yolwandlekazi iPacific, Hawaii imaka ekhoneni lasenyakatho mpumalanga ye I-Polynesia.
Inqaba ebabazekayo ye-neo-Norman Victorian yasungulwa ngekhulu le-19, iPenrhyn Castle eBangor iqukethe iqoqo lemfenisha yesitayela se "Norman" nemidwebo yamakhosi amadala.
Kubandakanya amakhulu eminyaka omlando, uCatedral de Santa Ana angabonakala cishe kunoma yiliphi iphuzu enkabeni yedolobha laseLas Palmas.
IMizoramu 'iyisitoko sokuzijabulisa' esidala esivakashele isivakashi esiqondayo, nenqwaba yemikhosi nemidanso, imisebenzi yezandla, izimbali nezilwane, ubuhle bemvelo obumangalisayo nesimo sezulu esipholile.
UPhra Kahn eLopburi uyindawo yesakhiwo esincanyana, izinsalela zesigcawu se-Khmer (spire ende-efana spire, ngokuvamile eqoshwe ngokucebile), amabala ambalwa nezinkawu eziningi.
IPalacio Estévez eMontevideo yayiyisakhiwo samahhovisi sabongameli base-Uruguayan kuze kube ngu-1985. Namuhla siyimyuziyamu kamongameli we-Uruguay.
IBöttcherstrasse eBremen iyisitha esimangalisa kakhulu seJugendstil (Art Nouveau) esukela esigcawini esikhulu sibheke emfuleni.
I-Barbecue iyisisekelo sokudla okuningi kuka-Texan futhi amanye ama-Texans azokugcona uma uyibiza nge-BBQ.
ILiechtenstein ihlangene ne-Uzbekistan, eboshwe kabili; elilodwa lamazwe amabili kuphela elizovulwa ngamazwe avinjelwe umhlaba.
ISano idume ngeSano Premium Outlet, Sano ramen-noodles neSano Yakuyoke Daishi ekhipha abantu ebangeni elingathandeki nelibucayi.
I-Oljeön (“iSiqhingi Samafutha”) ngaphandle kweFagersta iyindawo yokucoca u-oli yakudala kunazo zonke emhlabeni.
I-Erebuni Museum of History e-Yerevan imi ngaphansi kwegquma le-Arin Berd, phezulu lapho i-Urartian Fortress Erebouni imile khona kusukela ngo-782 BCE.
Umjaho wezithuthuthu waminyaka yonke wase-Australia i-Grand Prix ubanjelwa eMqhudelwaneni wezimoto owakhiwa ngo-1950s ePhillip Island, futhi udonsela umbimbi omkhulu wabathandi bezemidlalo yezimoto njalo ngonyaka.
Ukubingelela ngesiSwahili kubaluleke kakhulu futhi kunide futhi kudwetshwe.
Ibhishi laseMaresias ngaphandle kweSão Sebastião liyingxenye yesifunda samazwe aphesheya kwezilwandle futhi lithathwa ngokuthi “i-Ipanema ye São Paulo ”.
Okunye okuhehayo e-El Cerrito yiMetallica House, lapho iqembu lesimbi elinamandla laligcina khona maphakathi nawo-1980.
I-Shah Jahan Mosque e-Thatta yayinesiphiwo somuzi yinkosana eyakha Taj Mahal ukubonga idolobha ngokwakha izindlu uMbusi Shah Jahan.
I-Torre del Homenaje yiyona kuphela ingxenye esele yendawo yobukhosi yamaMoorish e-Requena, eyakhiwe cishe ngekhulu le-10 njengomngcele wokwenza umngcele.
AmaSuwabute Clams angatholakala kuphela ogwini lwe-Okuragahama eHyuga; amagobolondo abo asetshenziselwa ukwenza amatshe womdlalo.
Ukudla kwawo wonke amazwe aseNordic kuyafana, yize izwe ngalinye linezitsha zalo ezisayina.
Kwa-Israyeli amabhasi nezitimela zingakhokhwa yikhadi lakwaRav Kav futhi kungakuhle kakhulu ukuthi noma yiluphi uhambo oluya e-Israel luthole iRav Kav ngokufanele lapho selungena ezweni.
Izindatshana ezidingida ukuzindla eMnyuziyamu waseNanjing zifaka isudi yokungcwaba i-jade kanye nomnyango oklwelwe kusukela esikhathini se-Ming Por Porinin Pagoda.
Ukundizela e-Ísafjörður, uphathwa ngokubuka okuhle kwamafjords asuka esikhumulweni sezindiza.
Kunamathempeli omlando kakhulu eBishnupur kunakwenye indawo eseWest Bengal.
Inani elikhulu lezimangaliso zemvelo ezinkulu kunazo zonke emhlabeni, ezinde kakhulu noma eziphakeme kakhulu zitholakala eNingizimu Melika.
I-Manteca inezinhlobonhlobo eziningi zokuhlobisa eziklanyelwe ukunika izivakashi, abasanda kufika kanye nabahlali isikhathi eside ngendlela efanayo ngesiko lomphakathi, umlando kanye nomnotho.
ICoimbra yisihlalo semanyuvesi amadala kunabo bonke emhlabeni enekampasi ebhalwe ku-UNESCO.
Kuqala ukuqashelwa nguMatthew Flinders ngonyaka ka-1802, waqamba isiqhingi saseKangaroo ukuhlonipha umkhosi we-kangaroo yena neqembu lakhe abawujabulela kulesi siqhingi.
IGlienicke Bridge edlula emfuleni i-Havel ukuxhuma amadolobha asePotsdam naseBerlin eduze kwaseKlein Glienicke yayisetshenziselwa ukushintshanisa izinhloli ngesikhathi sempi ebandayo.
Noma iningi lezindawo lingasikhulumi isiFulentshi, amagama amaningi omgwaqo, amagama ezindawo zokudlela kanye namapulazi e-Franschhoek anamagama esiFulentshi.
Isikhungo Sokuthola Isidumbu Senyosi saseClovermead Apiaries e-Aylmer sinezinyosi ezinkulu kakhulu zenyosi ye-Ontario.
IKourion ngaphandle kweLimassol yindawo yezamandulo egcinwe kahle yemidlalo yemidlalo yeshashalazi egcinwe kahle iGrie-Roman, The House of Achilles, The Altar of Apollo kanye nokubukwa okumangazayo kweCurium Beach.
Amahlathi aseStewart Island ayindawo yokuphila yezinyoni, ngoba kunezidalwa ezimbalwa ezidla ubhedu kuneziqhingi zaseNew Zealand.
Uphahla lweKorea Yombuso waseKošice luhlotshiswe ngemidwebo yezigcawu ezivela ezinhlekeleleni zikaShakespeare u-Othello, Romeo noJuliet, iphupho leKing Lear neMidsummer Night.
Itholakala endaweni okukhona kuyo iPatna namuhla, idolobha lasendulo lasePatliputra, elinesikhathi esikhazimulayo somlando esithatha iminyaka eyinkulungwane (500BC-400AD), yabona ukukhuphuka nokuwa kwemibuso yokuqala yaseNdiya.
Imigwaqo yangekhulu le-17 nezakhiwo zaseDiamantina zingofakazi beminyaka yokumba kwe-daimane neyamagolide eBrazil, futhi isikhungo sayo somlando sibhalwe njengeNdawo Yamagugu Omhlaba.
Eminye yemicimbi emikhulu yezomphakathi e-U.S, iKentucky Derby Festival yenzeka kula masonto amabili ngaphambi koMgqibelo wokuqala ngoMeyi eLouisville.
I-Ise yaziwa ngokuyindida nge-Ise Shrine engaziwa ukuthi, isayithi elingcwele nelibaluleke kunawo wonke lamaShinto kanye nekhaya elidumile le-Emperor's Sacred Mirror.
I-Et'hem Bey Mosque eTirana ibhekwa njengenye yamaSulumane amahle kakhulu e-Albania anemihlobiso ethokozisayo nobuciko ngaphakathi kuyo.
IPatek Philippe Museum eseGeneva inezitezi ezine zamawashi amahle kakhulu asewashi namawashi avela emakhulwini eminyaka adlule, bobabili uPatek Philippe neminye imikhiqizo.
Ukuqalekisa akukho emthethweni esiqhingini saseNevis.
Ukudla okuthandwa kakhulu eKathmandu kungaba yi-momo, indawo yokulahla inezimpande zayo eTibet naseChina.
Izimpungushe ezindizayo zikaTongatapu zithathwa njengezingcwele eTonga; inkosi kuphela evunyelwe ukubazingela.
Ngemuva kwamasonto amaningi elwa nokulawulwa kweTakamatsu castle e-Okayama, uToyotomi Fiyoshi wakwazi ukuphoqa ukuthi anikezele ngokushesha ngokuphambukisa umfula ukugcwala inqaba.
Ama-Nordic buffet / smörgåsbord osebenzisa amanzi olwandle iBaltic ngokwesiko kufanele adliwe njengokudla okuyisikhombisa; i-herring, okunye ukudla kwasolwandle, ukusikeka okubandayo, inyama efudumele, umvimba, ushizi nesobho.
Iwindi le-rose eSt John's Episcopal Church eFranklin iwindi lesibili ngobukhulu emhlabeni uTiffany emhlabeni futhi liphakathi kwezintandokazi zikaTiffany.
Isithombe esibonakala siyinqaba somholi wokuqala wamaKhomanisi waseBulgaria sime endaweni yomgwaqo eCotonou, eBenin njengensali yemizamo yayo yamaKhomanisi eshiywe.
Izinkawu zase Uluwatu ePennsylvania laseBukit zinobuhlakani bokweba izibuko zezivakashi.
E-cuisine yaseChina, i-tofu iza ngezindlela eziningi ezahlukahlukene, eziningi zazo ezingase zingabonakali ngokuphelele.
Isakhiwo esijabulisayo sendlunkulu ye-KGB esitaladini esikhulu saseMinsk sinefenade efakazela lokho okutholakala ngaphakathi.
Isizinda samasosha sangaphambilini, esiguqulwe saba yinsimu enkulu yezitshalo ngo-1993, iJardín Etnobotánico e-Oaxaca sibonisa ukwahlukahlukana kwezinto eziphilayo zezitshalo zase-Oaxacan.
Njengoba inezingqungquthela eziyisishiyagalombili eziphambili eziyishumi eziphezulu kakhulu emhlabeni kanye nezinye izindawo ezinhle kakhulu ezitholakala kuphela ngezinyawo, ukuhamba eNepal kungenye yezinto ezingafani Asia.
Igama le-Arkansas liyisabizwana sesiFulentshi segama lesiSiouxan elisho ukuthi "izwe labantu abangaphansi kwabaphansi", lamiswa ngumthetho ngo-1881 futhi kusephoqelekile ukuthi igama lelo lishiwe kabi.
Isigcawu seCity Hall of 's-Hertogenbosch sakhiwa ngekhulu le-17 futhi sibonisa ubuDashi bokuthi.
Sikhulu kakhulu kunesaseJersey, isibhedlela saseJalimane esingaphansi komhlaba eGuernsey sakhiwa ngesikhathi kuhlaselwa i-Allies engakaze ifike.
AmaNazaretha sekuyiminyaka engama-2,000 XNUMX ehlangene nobukrestu futhi akhange amakhulu ezigidi zabahambi abavela emhlabeni jikelele.
Kwesinye isikhathi okubizwa nge- “Country Music Capital of the World”, iNashville ifaka i-Country Music Hall of Fame neMuseum.
I-El Castillo yakhiwa kungekudala ngemuva kokuhlaselwa kwabaphangi ngo-1670s ukuvikela iLake Nicaragua kanye namachweba alo, ikakhulukazi iGranada, ePirates.
Ekupheleni kwe-St Kilda pier yi-St Kilda breakwater, okuyikhaya lamagundane amanzi endabuko kanye namaphinifa amancane athandwayo.
Ikhamera yeRadcliffe isebenza njengegumbi lokufundela abafundi base-Oxford ngakho-ke ayitholakali kalula. Ingaphandle elihle, nokho, likufanele ukubukwa.
ILlightouse of Port Said yakhiwa ngo-1869 nguFrancois Coignet esebenzisa ukhonkolo oqinisiwe okokuqala emlandweni.
IMinneapolis ingelinye lamadolobha ambalwa ukusebenzisa izimpawu zomgwaqo ezinemibala ehlukahlukene. Imibala ikhombisa ukubaluleka kokulima ngesikhathi sesiphepho sasebusika.
Uhlelo lweMass Rapid Transit uhlelo lweTaipei lidalulwe kabanzi njengenye yezinhlelo ezithembekile nezisebenzayo emhlabeni.
IDmitrov izungezwe amaxhaphozi, futhi inomnyuziyamu we-frog ogubha idolobha ngokukhombisa zonke izinhlobo zezinto ezihlobene nexoxo.
Igama laseLynchburg lisuselwa kumsunguli waso, uJohn Lynch, othi, eneminyaka engu-17, aqala umsebenzi wokuhamba ngesikebhe ngaphesheya kweJames River ukuqhubekisela uhambo lokuya nokubuya eNew London.
Izingadi ze-baroque ezidume umhlaba wonke zaseHerrenhausen eHanover zenziwa ngekhulu le-17 leminyaka ukukopisha iVersailles Garden e France.
Enye yamaphakathi Salvador amabhishi yiPorto de Barra. Kwakuyindawo yokuqala yokuhlala okokuqala kwabafokazi baseYurophu ukufika eBahia.
IsiFilipino yinguqulo eguquliwe yeTagalog, ulimi oluyinhloko lwasenyakatho Philippines.
I-Basilica yaseSan Zeno inikezelwe kosanta waseVerona, umdobi onobuhlakani waseNyakatho ye-4, owabekwa njengo-Bishop waseVerona ngonyaka ka-363.
EDemocratic Republic of the Congo, ukuthwebula izithombe akukho emthethweni ngaphandle kwemvume esemthethweni, intengo yokugcina eyaziwa ngayo kwakungu-US $ 60.
Akukho okuningi ongakubona ku-Setúbal, kepha kuningi okufanele ukwamukelwe ezindaweni eziseduzane.
I-Walt Disney World iwumbukiso wemvelo wepaki ye-Disney emhlabeni jikelele nangesixazululo se park park esithandwa kakhulu emhlabeni.
URanong uhlala kwiKra Isthmus okuyingxenye emincane kakhulu yeNhlonhlo yeMalay.
IMiddletown, Connecticut inikeza izinsiza ezinhle kakhulu kulabo abaphethe ubuciko kwezobuciko.
Ama-Chaukundi Tombs eKarachi aphawuleka ngokubabazeka okwenziwe ngobuciko nangamatshe, isitayela esiyingqayizivele esifundeni saseSindh.
Umgede wase-Aranui unendawo yokungena yemhume futhi mncane kunabo bonke futhi ucole kakhulu kunemihume emithathu emikhulu ka-Waitomo.
ISt Magnus Cathedral eKirkwall iyisakhiwo esijabulisayo se-Romanesque esinezifundo eziguqukayo ezihlukile: ezibomvu ezivela eKirkwall nephuzi kwa-Eday.
I-Akureyri iyidolobha elihle kakhulu elinendawo yalo yi-fjord ebabazekayo, izitayela zokwakha i-eclectic kanye nemigwaqo enqamula emigodini.
IBaotou bekuyindawo eyomile eyakhiwe abelusi baseMongolia nezimvu zabo. Namuhla, indawo yedolobha elikhulu inabantu abangaphezu kwezigidi ezimbili.
Emakethe yase-Adjarra ngaphandle kwasePorto-Novo umuntu angathola izinhlobo ezihlukile zendwangu eboshwe ngendwangu, ubumba omangalisayo, izinsimbi zomculo ezingejwayelekile, imihlobiso ehlukahlukene ye-voodoo, nezinto ezijwayelekile ezijwayelekile emakethe.
Namuhla, iKreuzbergkirche eBonn isebenza njengesikole sesonto nolimi kanye nesiko lamaJalimane, kodwa mhlawumbe yaziwa kakhulu ngeHeiliger Steige (isitebhisi esingcwele).
Ukuvakasha kweZindlu zePhalamende eKapa kuzokujwayela iNingizimu Africa'umlando wanamuhla nohlelo lwezepolitiki.
Izinhlayiya ezibomvu zesihlabathi seCoral Pink Sand Dunes State Park zivela esitsheni esivimbayo seNavajo, ngaleyo ndlela zinikeze izindunduma igama lazo.
Isitsha esidumile kakhulu sikaNagasaki yi-champon, isitsha senhliziyo sama-noodle kumhluzi osuselwa engulube, ugcwele imifino, ubhekeni, umhluzi, isikwati kanye nama-scallops.
Ukuthuthuka nokuomile, ukuthuthukiswa kwangaphambi kwezivakashi i-Bukit peninsula kwakuyindawo yasemuva yaseBali.
IColombia idume ngekhofi yayo futhi iMedellín ngamahora ambalwa kuphela ukusuka ezikhungweni ezikhuliswa ikhofi zezwe.
Sochi ivame ukubizwa ngokuthi i-Unofficial Summer Capital ye Russia, noma uLwandle Olumnyama.
I-HMS Birkenhead iwukuphahlazeka komlando okubalulekile kwezizathu zobunjiniyela nezamasiko.
I-Indiana Dunes National Park iyathandwa ngenxa yezindunduma zayo ezinkulu zesihlabathi namabhishi amaningi eLake Michigan.
Edolobheni laseThailand elisemngceleni we-Mae Sai kunesifanekiso esikhulu esibhekene ngqo neMyanmar.
IJadeWeserPort Infocenter eWilhelmshaven ingumbukiso ethekwini kanye nokuhweba ngamakhemikhali kwanamuhla.
I-Pajcha Museum eSalta ineqoqo lobuciko bendabuko, izindwangu, izithonjana nobucwebe ezivela kulo lonke elaseNingizimu naseMelika Ephakathi.
Ithempeli Lika Luxor kwakuwumsebenzi ka-Amenhotep III noRamsses II the Great okuyi-colossi ne-obelisk emi emnyango.
Noma iyiphi i-prophylaxis yomalaleveva kufanele ithathwe ngaphambi, ngesikhathi, futhi (ikakhulukazi) ngemuva kokuhambela indawo ebanga ingozi yomalaleveva.
I-Scouse ehlukile kakhulu Liverpool inethonya elinamandla lase-Ireland kanye nelaseWales, futhi ihluke kakhulu kuleyo yezindawo eziseduzane.
IHamatsu idolobha elihlukile emhlabeni jikelele ngaphakathi Japan, ekhaya cishe ama-16,000 amaBrazil phakathi kwabanye.
Yize ezinye zezakhiwo ezinhle kakhulu zase-Dublin zadilizwa maphakathi nekhulu lama-20, kusasele inani eliphakeme.
IGeorgia Aquarium e-Atlanta iyidamu elikhulu kunawo wonke emhlabeni elinezilwane ezingaphezu kwezinkulungwane eziyikhulu kumalitha amanzi ayisigidi.
ISonto kwiGazi eliseYekaterinburg lakhiwa ngonyaka ka 2003 lapho kwabulawa khona uTsar Nicholas II nomndeni wakhe.
INagercoil idolobha eliseningizimu impela enyakatho yezwe laseNdiya.
Amasonto eSt Nicholas Bolnički naseSt Mary Bolnička e-Ohrid akhiwa ngekhulu le-14 ngezinkulungwane zemigodi ezazizungezile ezazisetshenziswa njengezindawo zokuhlukanisa izivakashi zedolobha.
E-Gettysburg ungavakashela ikhaya lasepulazini eligcinwe yilowo owayenguMongameli wase-US uDwight D. Eisenhower.
Umdwebo oyinhloko weMnyuziyamu weTropical Queensland eTownsville ukukhonjiswa kobuciko obuvela eHMS Pandora, umkhumbi owathunyelwa yiBrithani ukulandela i-HMS Bounty.
Ngaphambi kobukoloni baseBrithani, iKumasi yayiyinhloko-dolobha yoMbuso wase-Ashanti, enye yezimpucuko ezinkulu zase-Afrika.
ISouth Georgia Island yikhaya lezinyoni eziningi nezimpilo zasolwandle, kodwa indawo ekude nokuntuleka kwayo kuyenza indawo evamile yokuvakasha.
Ikhaya leSkiathos lomlobi u-Alexandros Papadiamantis, owabhala amanoveli angaphezu kwekhulu asuselwa kakhulu empilweni yesiqhingi, seliphenduke umnyuziyamu.
I-Onomichi iye yabizwa ngokuthi "idolobha laseJapan", idolobha elinetheku lamathempeli nezincwadi ngasolwandle lwaseSeto Inland.
Ukusuka eWheitianga izikebhe zokuhamba zihamba uhambo lokuya olwandle olubabazekayo lweMercury Bay kanye neTe Whanganui-A-Hei Marine Reserve nokuphila kwasolwandle okuchichimayo.
Idolobhana laseSchengen liyaziwa ngoba iSivumelwano seScgengen, esayiqeda ukulawulwa kwamaphasiphothi phakathi kwamalungu athile e-EU, sasayinwa lapha ngo-1985.
Ngenkathi i-JFK isenamaphethelo amaningi kunezikhumulo zezindiza ezinkulu kakhulu, empeleni sisendaweni yayo encane kunazo zonke emlandweni.
Ithonya laseNtshonalanga Yurophu lidlangile eSigodlweni sePeterhof, elibekwe ngemiyalo kaPeter the Great.
Izimpahla ezingabaliwe, kunendawo ebanzi yokuxoxisana lapho uyothenga eChina.
I-Unalaska iyiphuzu elisentshonalanga kunazo zonke emigwaqweni i-Alaska Marine Highway, futhi ngenxa yalokho iphuzu elisentshonalanga kakhulu emazweni aseMelika atholakala ngokuhamba komhlaba okuhleliwe nokuhamba kwezilwandle.
Islamic Cairo ayiwona amaSulumane kakhulu noma incane kulo lonke leli dolobha, kepha yindawo yomuzi ephethe kakhulu, izikhumbuzo ezinkulu kunazo zonke nezaziwayo kakhulu zamaSulumane.
Eqinisweni i-Ireland inamasiko amabili: isiko lomlando lesi Gaelic kanye nesiko lakamuva lokukhuluma isiNgisi elangena esikhundleni salokho.
IBatumi Botanical Garden iyindawo ethule, eduze koLwandle Olumnyama eweni eliphakeme futhi konke kuluhlaza futhi kupholile.
Iphiramidi yeLanga yiphiramidi enkulu kunazo zonke ku- I-Teotihuacan isakhiwo esinokubukwa okuhle kwezintaba ezizungezile.
Ngisho esizweni esinama-gourmands agourmands u-Osaka waziwa njengendawo enhle yokudla, enziwe isibonelo yi-Osakan maxim kuidaore, "zidle uzonakalise".
Ngokungafani neVladivostok, iKhabarovsk ayikaze ivalwe kubantu bakwamanye amazwe, futhi igcina umuzwa ohlukile wamazwe omhlaba, onqabile ezikhungweni zesifundazwe zaseRussia.
Impi ebuyiselwe yempi i-Jylland, kulezi zinsuku iphumula i-keel yayo enkulu ngokuqinile kukhonkolo, ngaphakathi kwamamitha olwandle e-Ebeltoft iyikhumbi yamapulangwe ngobukhulu emhlabeni.
E-Abu Simbel, kuzizwa kubanda okungenani okungu-10 ° C kuno-20 Aswan ngenxa echibini leNasser nomoya ovela kuwo.
IBrownsea Island ngaphandle kwasePoole idume ngobuningi bayo bama-squirrel abomvu, futhi njengendawo yokuzalwa kweScout Movement.
Ngokucacile ukubukwa okuhle kweGeorge Town kanye neStraits of Malacca kungatholakala ePenang Hill eduzane ne-Air Itam.
Namuhla i-Indianapolis yaziwa njenge- "Crossroads of America" ​​ngenxa yobuphakathi bayo e-America's Interstate Highway System.
Ngenkathi ekuqaleni kungazwakala njengomsebenzi wamaphupho, ukubhala ngohambo kungenye yobungcweti obunamandla bokuncintisana nobungakhokhelwa kahle nxazonke.
Nge capital capital yezwe yaseBrazil enezakhamizi ezingama-300,000, iBoa Vista ithule ngendlela ephawuleka.
Amabhishi anesihlabathi esimnyama nomhlophe anwebeka ngamamayela azungeze iPuerto Viejo de Talamanca ebanzi futhi evame ukushiywa, enikeza izendlalelo ezilungele ukuhamba nokushiswa yilanga.
ERivera ungahle ungaboni ukuthi weqa umngcele usuka e-Uruguay uye Brazil, okumakwe njengophawu lomngcele omhlophe ongenakuqhathaniswa.
I-co-Cathedral yasesiteji iSt Peter noSt Paul e-Osijek yisonto ende kunazo zonke eCroatia futhi inesikhala esiyi-90 m.
Yize iCampione d'I-Italia ingeyaseNtaliyane, inokuhlanganiswa okukhulu neSwitzerland: Kusetshenziswa iSwitzerland Franc, idolobha lisebenzisa izinhlelo zezingcingo zaseSwitzerland kanye nezincwadi zemeyili, kanti izicishamlilo kanye nama-ambulensi nazo ziSwitzerland.
I-Indian subcontinent kanye ne-Asia yonke kumapuleti ehlukene ezwekazi ahlangane; amaHimalaya nobubanzi obuhlobene kuseduze nomngcele wamapuleti futhi amandla okushayisana adala izintaba eziphakeme kakhulu emhlabeni.
ILa Grande Poste e-Algiers iwubuciko bokwakha kabusha kwe-neo-Moorish eyakhiwa ngo-1910 ngabaseFrance.
EPápa ungavakashela umnyuziyamu wokudaya aluhlaza okwesibhakabhaka emsebenzini wokugcina wokudaya owawuhlaza okwesibhakabhaka womndeni wakwaKluge owake waba ngomunye obaluleke kakhulu eCentral Europe.
Idolobhana elidala laseHoyi An liphikisana kakhulu nobusuku, lapho umsebenzi ongaphambi komfula ukhanyiswa yilambu elithambile.
Okuphawuleka kakhulu kwezindawo zokuhlala eSintra yiPena Palace; isigodlo sothando esiqongweni sentaba, esakhiwa ngaphandle kwendlu yezindela yaseHieronymite.
Iningi leziqhingi zaseTorres Strait lishiyelwa ohambweni olunamandla lokuzimisela noma labo abanamabhizinisi emiphakathini yendabuko.
I-Ashikeloni idume kakhulu ngomlando wayo njengenye yamadolobha amakhulu amaFilisti nasendabeni esebhayibhelini kaSamsoni.
IPurwokerto inomnyuziyamu oqondiswe ku-RA Wiriatmaja ophayona nohlelo lwebhange lase-Indonesia.
Umlando omude ka-Cleveland wokunotha kwezimboni uwushiye ugcwele ingcebo yamasiko kanye nokuqala kwenhlangano “yedolobha esimeme”.
IMnyuziyamu yaseBelize eBelize City iyijele langaphambili futhi manje isiyimnyuziyamu kazwelonke eBelize.
Isici esidumile seKatowice yiSpodek Concert Hall, ebizwa nangokuthi "isoso endizayo".
I-Mahamrityunjaya ithempeli ngaphandle kweMandi ingcwele ngokulinganayo kumaHindu, amaSikh namaBuddhist.
I-Wisconsin ye-quintessential ngoLwesihlanu ebusuku ifaka iklabhu yokudlela.
Isiteshi saseWakkanai esisanda kulungiswa sinezimpawu zokwenza iphuzu elisenyakatho impela kunethiwekhi yezitimela zaseJapan.
Endlini yokwakha iLviv's Post Museum, ihhovisi lokuqala lase-Ukraine lavulwa ngo-1629.
IGaborone inezindawo ezinkulu zezitolo, futhi sonke isitolo saseNingizimu Afrika okungenani sinamagatsha athile endaweni ethile edolobheni.
I-Cathedral Sanctuario de las Lajas e-Ipiales yakhelwe ngokubabazekayo ebhulohweni elingaphezu komfula iGuaitara.
Cishe izinhlobo ezingama-60 zezintende zezindabuko Australia; iningi limelwe ePalmetum eTownsville.
Yakhiwa ngesikhathi sokubusa kuka-Antonius Pius, we-138-161AD, inkundla yemidlalo yeshashalazi yaseRoma e-Amman ingahlalisa abantu abayi-6,000.
Lapho sekuyinsimbi ebaluleke kakhulu emhlabeni, ama-Völklingen Ironworks eSaarbrücken manje asevaliwe kepha agcinwe kahle futhi afakwa kuhlu njengendawo yamagugu omhlaba.
Idolobhana laseDobbs Ferry linikeza ukubukwa okuhle koMfula i-Hudson kusuka ezinhlotsheni ezahlukene zentaba yedolobha kuya phezulu emagqumeni, kufaka phakathi umngcele weNew Jersey Palisades.
Yize kungenye yamadolobha ayishumi nanye aseFrance, iHarlingen mhlawumbe ingumFrisi omncane kubo bonke.
Ukusikeka kwayo kungenzeka kube ekhabetheni ekhishini emhlabeni wonke jikelele, kepha iSheffield ayikaze iphinde ibuyele ngokwayo ngendlela amanye amadolobha aseNgilandi asenyakatho akwazi ukwenza ngayo.
UCheyenne udume kakhulu ngokubonakala enezinhlobo ezahlukene zesimo sezulu ngamamayela ambalwa.
IPekanbaru idume ngokuba ngelinye lamadolobha amakhulu ahlanzekile kakhulu e-Indonesia.
Ukuheha okuphezulu kakhulu kwendawo ezungeze iDatong City yiyona eneminyaka eyi-1,500 ubudala uYúngāng Grottoes - le migede eseceleni kwentaba nezindawo zokuphumula zigcwele izifanekiso zikaBuddha ezingama-51,000.
Izingu-176 zeSan Juan Islands zikhulu ngokwanele ukuba zibizwe.
Izikhumbuzo ezinhle kakhulu zase-Eritrean ziyimisebenzi yezandla yendabuko eyenziwe ngesikhumba, i-olive, ubumba notshani.
E-Salute Battery eValletta, kuqhuma isibhamu kabili ngosuku.
Ukudla kwasolwandle kungukuhleleka kosuku esiqhingini sase-Andaman naseNicobar; kusuka ezindaweni zokudlela eziphezulu ze-upscale ePort Blair kuya kuma-dhabas endawo e-Dolock, izinhlanzi eziningi.
Umuthi weHippocrates kuKos awusiwo umuthi wokuqala lapho uHippocrates waseKos wafundisa abafundi bakhe ubuciko bezokwelapha, kodwa kungenzeka abe yinzalo yawo.
I-blockhouse yakudala esindayo ku Canada, IFort Edward eWindsor (iNova Scotia) yakhiwa ngabaseBrithani ngonyaka we-1750.
IDonegal inezinkundla eziningi ezinhle zegalofu, ezinye eceleni kwamabhishi, futhi uLetterkenny uyisisekelo esifanele sokuvakashela igalofu.
I-Assembly Theatre eBurrillville iseduze komfula wamanzi amahle waseHarrisville.
Ukukhanga okukhulu kakhulu kweCórdoba yiMezquita, isonto elikhulu elidala eliguqukayo lamaSulumane elidume ngokuthi "ihlathi" lamakholomu ahlanganiswe ngemidwebo ebomvu enemibala yamaSulumane.
Ngesizini ephezulu, amathikithi e-Inca Trail kumele abhukishwe ngokushesha lapho etholakala, imvamisa izinyanga eziyisithupha ngaphambi noma ngaphezulu.
Ithempeli laseBahulara ngaphandle kwaseBankura kubhekwa njengesibonelo esihle kunazo zonke sethempeli deul lezitini elenziwe ngesitayela seKalinga ekwakhiweni kwenkathi yePala (medieval).
Yaziwa nangokuthi i- "bird's Nest" (鸟巢 Niǎocháo), iChinese National Stadium Beijing isakhiwo sensimbi esikhulu kunazo zonke emhlabeni.
UChieti uhlala endaweni yaseRoma Teate Marrucinorum, idolobha elikhulu laseMarrucini, okusaqhubeka kuchithwa amanxiwa alo.
Awekho amatekisi amaningi eBrunei, ngoba ubunikazi bezimoto nokusetshenziswa kuphezulu.
UJonathan Dickinson State Park oGwini lweTreasure yindawo enhle yokubona izindawo zotshani zemvelo zaseFlorida, amahlathi, ihlathi leMangrove kanye nexhaphozi.
Kanye ngonyaka uSkanderborg uyaphila njengoba ephethe umkhosi womculo wesibili ngobukhulu we IDenmark, "IDenmarks Smukkeste festival" noma umane "SmukFest".
Indawo ye-Rason Special Economic ngokwezindlela eziningi iyizwe elihlukile neNyakatho Korea.
IJamestown iyingxenye yakudala ye-Accra futhi ihlala iyisikhungo sokudoba esisebenzayo
IBrisbane “yidolobha elikhulu lensimu” elidume ngokuba namaqabunga alo, izikhala ezivulekile nangejubane elimnandi lempilo eliqhubeka phakathi kweziphethu zomfula waso omkhulu.
ICotswold Water Park eSwindon iyipaki lamanzi elikhulu kunawo wonke e-United Kingdom futhi inamachibi angaphezu kuka-150 akhiwa ngokugcwalisa izingcezu zakudala zamatshe.
Ukuthwebula isithombe se-Ho Chi Minh mausoleum eHanoi kuvunyelwe kuphela ngaphandle.
Izitsha eziningi zaseBulgaria zibhakwa kuhhavini, zibosiwe, noma ngesitshulu.
Okunye okugqamile eMnyuziyamu we-Archaeology eKütahya isarbleopha sarcophagus eyembiwa e-Aizanoi, enemidwebo enemininingwane eminingi eyayizungezile.
UReno uzimaketha ngokuthi "Idolobha Elikhulu Kunawo Wonke Emhlabeni".
Ibizwa ngokuthi i-African Camelot, iFasil Ghebbi (Royal Enclosed) eseGondar iqukethe izinqaba eziningi nezigodlo nezinye izakhiwo kubandakanya nezindawo zamabhubesi (manje ezingenabantu).
Yize i-Emmen ingeyona indawo ethokozisayo yabahambi, yaziwa kahle ku- Netherlands ngesiheho sayo esikhulu kunazo zonke: i-zoo.
Haitian cuisine ingxube enhle yamasiko esiFulentshi nawase-Afrika.
Ngokusobala i-Australia (noma okungenani iVictoria) enkulukazi olwandle, i-Apex eMildura yindawo enhle yokubhukuda.
Sekuyiminyaka engama-200, iziphethu ezishisayo zemvelo ezungeze iHot Springs National Park yanamuhla zisetshenziselwa ukwelapha izifo nokuphumula.
Amachibi asePlitvice Lakes National Park adume ngemibala yawo ehlukile, esukela kwi-azure kuya eluhlaza, grey noma eluhlaza okwesibhakabhaka.
Naphezu kwegama lakhona, i- “artichoke” ye-Jerusalem ayixhumeki ne-Jerusalema, futhi ngeke uyithole isetshenziswa kabanzi lapha ukwenye indawo.
Umlando waseGlacier National Park, eBritish Columbia uhlanganiswe eduze nemizila emibili yokuhamba yaseCanada yokuhamba, iCanada Pacific Railway (CPR) kanye neTrans-Canada Highway.
Ukuheha okukhulu kweMbali Museum kaZwelonke Yomlando Wezempi eDiekirch yi-1: 1 wadogo dioramas.
Izivunguvungu ziyingozi kubahambi ikakhulukazi eduze nogu oluseningizimu I-united states, lo I-Caribbean, Japan, kanye nePhilippines.
ITønsberg idolobhana elidala kunazo zonke eNorway.
Njengezinqaba eziningi eJapan, inqaba yaseWakayama yakhiwa kabusha ngokwengxenye, ngoba yalimala ngamabhomu ngesikhathi sempi.
Isifunda saseWhangaroa sinamanye emabhishi anesihlabathi esimhlophe kakhulu eNew Zealand, alungele ukubhukuda, ukudonsela amanzi ngomshoshaphansi kanye nokushweza ngezolwandle, kanye nokuvilapha nje.
Isayithi elidala leNgoma Kiln libonisa isikali sokukhiqiza nobungcweti obukhulu bokubumba izinto zobumba e-Chaozhou yasendulo.
IJundiaí ngenye yezindawo ezimbalwa esifundazweni saseSão Paulo ngaphandle kwendawo kaMasipala waseSão Paulo lapho kungenzeka khona ukufika ngesitimela.
I-Muslibegovića House ese-Mostar ithathwa njengendlu enhle kunazo zonke kusukela esikhathini se-Ottoman eBalkan.
I-Aberdeen inesakhiwo semidiya efana namadolobha amaningi e-UK, ngakho-ke esivakweni sokuqala, imephu iyasiza.
E-Ohiopyle ungavakashela i-Fallingwater, indlu eyakhiwe phezulu komfula okuyisakhiwo esidume kakhulu sikaFrank Lloyd Wright futhi yathatha njengomunye wemisebenzi emihle yokwakha e-US.
Indawo ezungeze iCoron idume ngokudonswa kwempi kweMpi Yezwe II, futhi lesi siza saze saqanjwa ezinhlwini eziningi zezindawo eziphakeme zokudonsa emhlabeni.
Itholakala endaweni yesakhiwo sangaphambilini se-switchwboard ye-Northwest Bell, i-Cle Elum Ucingo Museum iqukethe izinto zobuchwepheshe bezingcingo kusuka ngo-1901 kuya ku-1975.
UZorats Karer eduze noSisian uyimpendulo yakudala ye-Armenia ne-cruder kuye Stonehenge in England.
Okunye okuhehayo eBiratnagar yiJute Mills, okuwumsebenzi wakudala wezimboni eNepal.
Yize yonke iGreenland yaziwa ngokuba ngamakhaza, izingxenye ezahlukile zeGreenland zinamazinga okushisa ahlukahlukene kakhulu.
I-Musée National Boubou-Hama eNiamey inezindawo eziningi zaseHausa ezenziwe ngamawashi ezibonisa iNiger yendabuko neyanamuhla futhi ungomunye weminyuziyamu ehamba phambili eNtshonalanga Afrika.
IWaterford yidolobha elidala kunawo onke e-Ireland futhi idume ngomlando wayo oshisekayo nomlando othakazelisayo.
Indawo engafundeki yase-United States engahlalwa muntu, esinye isiqhingi esincane kunazo zonke sase-US Little Outlying Islands.
Imibukiso eyingqophamlando yomnyuziyamu waseMaritime eMalacca ithathwa ngaphakathi komfanekiso weFlora de la Mar, umkhumbi wamaPutukezi wekhulu le-16.
I-Hippie Fair yamasonto onke e-Belo Horizonte ingelinye lamathenda amakhulu kwezobuciko eBrazil futhi inikela ngakho konke kusuka kwezobuciko kuya kubucwebe, ifenisha kuya okwezikhumbuzo, okokugqoka kuya ekudleni.
Indawo iManagua phakathi kwamadolobha ayimbangi yeLeón neGranada yenza kwaba isiza esihle sokuyekethisa lapho inhlokodolobha iphinde yahanjiswa ngeminyaka yo-1850.
Yasungulwa ngo-1926 kusetshenziswa ubuchwepheshe bukaCarl Zeiss, i-Zeiss-Planetarium eJena ingenye yamaplanethi asendulo amadala emhlabeni.
Eminye imiphakathi yaseQuy Nhon yathuthuka yaba yindawo ekhethekile ye-bánh xèo (uhlobo lwe-pancake), lapho abathengisi bezindawo zokudlela noma abathengisi basemgwaqweni behlangana ngokuncintisana ngobungani.
I-Ibiza ne-Formentera baziwa nangokuthi i-Islas Pitiusas (elivela egameni lesiGreek elithi "pitys" elisho ukuthi umuthi kapayini) ngenxa yobuningi bezinhlungu zamaphayini ezihlanganisa izindawo zabo zomhlaba.
ILivingston, iMontana igcina umlando wayo omkhulu we-Old West unezakhiwo ezingama-436 kuRegional National Rejista.
I-Old Dhaka ayinayo ingqalasizinda yezokuthutha umphakathi ngakho-ke umjikelezo we-rickshaw ungayikhetha.
Indawo ekaMonterrey eyaziwa kakhulu yintaba edabukisayo enjenge-Cerro de la Silla ebusa uhla lwesibhakabhaka sendawo.
Ngokomlando iyingxenye yoMbuso Wase-Austrian futhi ihlukaniswe umfula iRhine, idolobha laseLaufenburg namuhla EJalimane, ngokwengxenye eSwitzerland.
Idume ngamanxiwa ayo asethempelini, iBatujaya ihumusha igama elithi "amatshe (okhazimulayo)".
IDahlonega kwakuyindawo yokuqashwa okukhulu kwegolide, kwathiwa eyokuqala e-US yizakhamizi zendawo.
EWatford ungavakashela iWarner Bros Studios.
IMunda Wanga Environmental Park eLusaka yaqalwa ngonyaka we-1956 njengengadi yangasese futhi isikhule saba yisikhungo sokuqala semfundo yezemvelo eZambia.
Izindlu Eziyisikhombisa Ezinhle ePort of Spain zakhiwa ngezikhathi zamakholoni futhi zinemibhalo emnandi kakhulu.
ISulayman Mountain esondela e-Osh igcwele izingosi zasendulo zokukhulekela, ezinye zisasetshenziswa, zivela eminyakeni eyikhulu edlule futhi zabheka isibonelo esiphelele sentaba engcwele yase-Central Asia.
ICronulla yiyona kuphela indawo ebhishi yaseSydney etholakala emgqeni wesitimela futhi ngenxa yalokho ingenye yamabhishi aseSydney atholakala kalula.
Isonto elihlukile le-Saint-Christophe eliyingqayizivele eCharleroi libone izengezo ezivela cishe kuzo zonke isitayela sezakhiwo selokhu lasungulwa ngo-1667.
Akukho ukuvakashela iZambia kuqediwe ngaphandle kokuma eVictoria Falls, enye yezimpophoma ezimangalisa kakhulu emhlabeni.
Ngenkathi uvakashelwe okuncane kunamabhodlo wokuheha izivakashi owaziwa kangcono njenge Chichen Itza, abantu abaningi bathola amaCopán Ruinas ethakazelisa ngokwengeziwe.
Insipho yomnqumo yaseNablus ibisaziwa kakhulu ngamakhulu eminyaka, futhi yenziwa ngezandla efektri eseDolobheni Elidala.
ETaganrog ungavakashela indlu yokuzalwa yombhali waseRussia u-Anton Chekhov.
ITibetan Plateau iyindawo enkulu kunazo zonke emhlabeni, futhi ngamamitha aphakeme angaphezu kuka-4,000m, futhi iphakeme kakhulu emhlabeni.
I-Red Hook ukuphela kwendawo ngaphakathi I-New York lapho ungathola khona umbono wokuqala we-Statue of Liberty emhlabeni.
I-marsupial enkulu kunazo zonke emhlabeni, i-Tasmanian devil yona ibonakala ngokwakhiwa kwayo okuqinile nokuqina kwemisipha, uboya obumnyama, isikhafu esikhulu kakhulu esiphazamisayo, kanye nokuqina lapho usuthisa.
I-Eureka Springs yaqhamuka cishe ubusuku bonke yazungeza imithombo yamanzi amaningi ebandayo kule ndawo, okucatshangwa ukuthi inezindawo zokupholisa.
Indlu yokuhweba yaseHermansons eHaparanda yakhiwa ngonyaka we-1832 futhi ingesinye sezakhiwo ezigcinwe kahle eNyakatho yeSweden.
Uhambo olusuka esangweni lesiya esiqongweni se Mount Kilimanjaro kufana nokuhamba usuka e-ikweyitha uye e-Antarctica uma kuziwa ngezinsuku ezimbalwa.
IMcMichael Canadian Art Gallery eVaughan idume ngokuzinikela kwayo ekuqoqeni nasekuboniseni ubuciko baseCanada kuphela.
UQufu udume ngendawo yokuzalwa kukaConfucius.
IMainau inakekelwa njengesiqhingi sengadi kanye nemodeli yezindlela ezinhle kakhulu zemvelo.
IMonumento aos Açorianos ePorto Alegre iyisikhumbuzo esiphakeme esingu-17 m esikhumbuzweni sabantu base-Azores, ababengabokuqala ukuhlala lapho.
Esikhungweni iMiraikan Science Center e-Odaiba, kwethulwa ubuchwepheshe obusha baseTokyo njengamarobhothi kanye namamojula wesikhala bese kunikelwa imiboniso nokuhlolwa ngokomzimba kwengqondo ebuzayo.
Uma ufuna i-“Alaska yangempela” Anchorage akuyona, kodwa ungayibona usuka lapho.
Enye into ehehayo e-Arica yi-Cathedral of San Marcos, eklanywe nguGustave Eiffel njengombhoshongo ku Paris.
Amapaki anakekelwa kahle nokubuka okungokomlando kwenza idolobhana lase-Alpine leBad Reichenhall elinye lamatshe ayigugu abaluleke kakhulu eBavaria.
Izindawo zokudlela eziningi zikaPiran zitholakala eceleni komfula wamanzi, kunendawo yokuhlala evulekile nokubukwa okuhle.
I-UNESCO World Heritage Programme ihlose ukubala nokugcina amasayithi abaluleke kakhulu, kungaba ngamasiko noma kwemvelo, efeni elivamile lesintu.
Isikhalazo esiyisisekelo sokudonswa izinyosi yithuba lokuthola impilo yasemanzini ngaphansi kwesimo semvelo ngaphandle kwemishini eyinkimbinkimbi nokuqeqeshwa okudingekayo ekujuleni kwe-scuba.
I-Acadia National Park isogwini oluwugwadule, olunamadwala lwe- “Downeast” Maine.
Itholakala emagqumeni ambozwe ngupayini angaqediwe, futhi iyikhaya kwizimpophoma eziningana, iShillong yaziwa nangokuthi iScotland of the East.
IMnyuziyamu yaseSonora eHermosillo ifakwe esigodlweni senkundla endala enamatshe anjenge-penetentiary yamatshe yakudala eyakhiwa ngo-1897.
EPécs ungabona izinsalela zezikhumbuzo zesikhumbuzo zobuKristu bokuqala, kusukela esikhathini samaRoma lapho idolobha lalaziwa ngokuthi iSopianae.
IsiZulu siwulimi olunethoni, ngakho-ke incazelo yamanye amagama incike ekutheni usebenzisa iphimbo eliphakeme noma eliphansi.
I-Nature Park Bulgarka imayelana nendawo ephakathi nendawo eBulgaria futhi iqukethe enye yezindawo ezinkulu ngokusebenzisa iziNtaba zeBalkan, indawo yeS Shipka.
Idolobhana lanamuhla laseJeriko lifaka indunduma yasendulo eyaziwa ngokuthi yi-Tell es-Sultan, izinsalela zamadolobha ezinqwabelene ezake zaba khona kule ndawo iminyaka engaba ngu-9,000, kusukela esikhathini seNeolithic.
Izwe lase-Rocky Mountain liqukethe amapaki ezwe amakhulu kunawo wonke e-US, imiphakathi yabomdabu baseMelika, kanye namagugu avela eNtshonalanga West.
Emgwaqweni uSilk Gansu umaka ukuphela noma ukuqala kweChina kufanele kuye ngokuthi ngabe uya empumalanga ubheke eXi'an noma entshonalanga ubheke e-Asia Ephakathi naseYurophu.
UMark Twain uncome isithombe esibunjiwe sebhubesi elimele ngokulimala eNgonyameni yeNgonyama kaLucerne "njengetshe elicasuke kakhulu futhi elihamba phambili emhlabeni."
Umngcwabo weSanko Harvest wengozi eCape Le Grand National Park ungowesibili omkhulu kakhulu ongalimala emhlabeni futhi omkhulu kunabo bonke ogwini lwase-Australia.
Into ekhethekile eTrinidad neTobago nguMauby, isiphuzo esenziwe ngegxolo lesihlahla se-mauby nezinongo, njenge-anise nesinamoni.
Uma uhlose ukuthwebula izithombe ezikude - ikakhulukazi izilwane zasendle, ukwenza isibonelo uma uhamba nge-safari noma ukubanjwa kwezinyoni - uzodinga ilensi yefoni.
Kuyo yonke iDüsseldorf ungahlangana nosayizi wokuphila wabantu abame kukholamu lokukhangisa, labo okuthiwa abangcwele bezinsika.
Izintaba zibonakala cishe kuzo zonke izindlela, i-Abbotsford inesinye sezindawo ezimangalisa kakhulu eBritish Columbia.
Umbhoshongo omude ongamamitha angama-368 wakhiwe ngokhonkolo futhi umi ngemilenze emithathu, iRiga TV Tower ngumbhoshongo omude kunayo yonke e-European Union.
IMelbourne yaziwa njengenhloko-dolobha yezemfashini yase-Australia enezindawo eziningi ezitolo ezinkulu kanye nezitaladi ezinamabala amaningi.
Ushizi omiweyo yinto ekhethekile yeJeghegnadzor.
Amanxiwa amaningi amahle kakhulu e-Ayutthaya akhombisa ukuthi leli dolobha lalingomunye wamadolobha aseningizimu mpumalanga ye-Asia (futhi mhlawumbe amadolobha achuma kakhulu) ngekhulu le-17.
Ingadi yeConakry Botanical iyaziwa ngezihlahla zayo zekapok.
Uphahla lwamapulangwe lwesonto le-Ancona lekhulu le-11 lisesimweni sesikejana esibheke phezulu futhi isici salo esisobala kakhulu yi-cupola enamacala ayi-12.
Emakethe yamaWitches eLa Paz abathengisi bathengisa izinto ezinjengama-llama fetus kanye namaxoxo omisiwe emicikilishweni yama-Aymara, kanye nezithonjana zeSepha itshe ne-aphrodisiac formula.
I-Alaska Marine Highway inikezela ukuxhumana ngemiphakathi eminingi yesiqhingi nesiqhingi, kufaka phakathi nenhlokodolobha yezwe i-Alaskan iJuniau etholakala kuphela ngesikebhe noma ngendiza yize isendaweni enkulu.
Yasungulwa ngonyaka ka-1416 ngumfundi kaTsong Khapa, i-Drepung Monastery eLhasa kwakuyindawo yezindela enkulu kunazo zonke futhi ecebe kakhulu eTibet kanti ama-lamas ayo asiza ukuqeqesha ngamunye omusha omusha uDalai Lama.
Yize ebukeka eyikhulu leminyaka, uMuziu da Companhia Paulista eJundiaí empeleni wakhiwa ngonyaka we-1979 ukukhokhela udumo ngomlando wesitimela wombuso waseSão Paulo.
IKristiansand eSouthern Norway kwesinye isikhathi ididaniswa neKristiansund eWest Norway noma iKristianstad eSweden ngakho-ke kwesinye isikhathi ibizwa ngeKristiansand S, lapho uS imele iNingizimu.
Ukuheha okuthandwa kakhulu eChae Son National Park isiphethu esishisayo saseChae Son lapho ungapheka khona amaqanda ngemizuzu engu-15.
Lawrence, Kansas bekulokhu kulungiselelwa ama-movie amaningi futhi kuyindawo ekhulayo yamasiko eKansas.
Ulwandlekazi lwe-Atlantic lubamba ukushisa ehlobo futhi lukhiphe ebusika, lunikeze Tenerife amazinga okushisa ahlala njalo unyaka wonke.
E-Rzeszów ungavakashela imnyuziyamu enikezelwe kumafilimu wezithombe ezithandwayo wezingane ngaphambi kokulala.
Kokubona okukhulu eKisangani yiziMpophoma zeBoyoma lapho abadobi besebenzisa izicupho ezivamile ukubamba izinhlanzi.
I-Waterloo iyingxenye yeCanada Technology Technology, futhi izinkampani eziningi ze-IT zisekela noma zinamahhovisi egatsha lapha.
Iziqhingi ezazingakaze zihlukane, iYeongjong neYongyu zihlanganiswe ndawonye yisikhumulo sezindiza sezindiza i-Incheon, esakhiwe phakathi kwazo emhlabeni owakhiwe kabusha.
I-Cromford Mill kwakuyigumbi lokugaya ukotini lokuqala elinamanzi emhlabeni elakhiwa nguRichard Arkwright ngonyaka ka-1771.
Ebangeni elingamakhilomitha angama-5,224, futhi yelula yonke indawo yezwe, iRuta Nacional 40 ingumgwaqo omkhulu wezwe lonke wase-Argentina kanye nohambo lokuhamba oludumile.
UKarlovy Vary, okusho ukuthi “uCharles 'Bath”, waqanjwa ngoCharles IV, inkosi yaseBohemia kanye noMbusi oMkhulu waseRoma, owasungula lo muzi ngo-1370.
Isifunda saseTodoroki eSetagaya, eTokyo iyindawo yemvelo ephakathi nendawo ehlala emadolobheni.
I-Wagga Wagga Art Gallery inezindlu ze-Australia Phrinta Iqoqo kanye nePrinta Australia Archive futhi iyikhaya le-National Art Glass Collection, uNdunankulu wase-Australia abukisa ngobuciko bengilazi.
IsiTurkey sinemisindo ethile yenkamisa engaziwa kwezinye izilimi eziningi, futhi ngenxa yalokho kungaba nzima ukuyifunda.
Abantu baseGuinea-Bissau bathanda ukuphuza i-warga, itiye eliluhlaza oluhlaza.
I-El Jaguar Zoo neDisco ePuerto Maldonado iyi-zoo ngesikhathi sasemini kanye neklabhu yasebusuku ebusuku.
EGumbini Lamagolide laseSweden History Museum e-Östermalm, eStockholm, uzothola amagugu egolide kusukela ku-Bronze Age kuya ngekhulu le-16.
Ujantshi we-Qinghai-Tibet ujantshi omkhulu kunawo wonke emhlabeni, ukhuphuka ngaphezu kwamamitha ayi-5,000 (16,000 ft) ngaphezu kwezinga lolwandle.
Igama leSouth Bend lisuselwa ekutheni lisendaweni engaseningizimu impela yoMfula iSt Joseph.
I-Elk Island National Park inabantu abaphezulu bezilwane ezincelisayo eziqhele ngamakhilomitha skwele kunanoma iyiphi enye indawo yasendle emhlabeni, ngaphandle kwalesi ISerengeti Amathafa ase-Afrika.
Ibanga le-Blue Mountain limbozwe cishe ngokungapheliyo ngokuhlukumezeka okunikezayo JamaicaIzintaba eziphakeme kunazo zonke umbala wazo ogqamile.
I-Chloister of Paradise e-Amalfi yakhiwa ngekhulu le-13 futhi iyikhaya lezithombe ezindala zokupenda, kanye nezinsika eziyi-120 ezakhiwe ngesitayela sesi-Arabhu.
Cishe ubukhulu beNdiya, futhi benza cishe ama-18% eRussia, i-Yakutia iyinhlangano ebusayo enkulu kunayo yonke eyengxenye yezwe yonkana emhlabeni.
ITaiping Lake Gardens yizingadi zomphakathi ezidalwe ngaphandle kwezimayini zamanzi ezilahliwe.
Izicucu zezinyawo kungenye yezici ezibaluleke kakhulu zokubuyiselwa emuva kwehlane.
INyonde Valley eseChapada dos Veadeiros National Park inendawo enjengezinyanga namadwala acwebezelayo, enamachibi amabili emvelo amakhulu, afanele ukubhukuda.
Isitsha esisodwa sendabuko ongasinikeza ngesikhathi sokuhlala eVanuatu ilap lap, ikhekhe lemifino lempande.
I-Teplice yaziwa ngama-spas ayo ashubisayo, athandwa kakhulu ngabavakashi abavela eMiddle East.
e-Los Angeles'IChinatown ayifani neyamanye amadolobha amaningi ngoba ibukeka njenganamuhla.
I-Kaisergang engu-200m (i-Imperial Corridor ne-Abbey Museum) iMelk Benedectine Abbey ihlotshiswe ngemifanekiso yababusi base-Austrian.
I-Plaza de los Mariachis ku Guadalajara kulapho kwavela khona umdanso wesigqoko odumile waseMexico (jarabe tapatío).
I-Alappuzha ivame ukubizwa ngokuthi yiVenice YaseMpumalanga ngenxa yemisele eyixhuma emithonjeni edumile yasentabeni yeKerala.
I-fjords ikhuphula ugu lwaseNorway ukusuka endaweni engamakhilomitha ayi-3,000 ukuya kuma-30,000 km. Iziqhingi zengeza amanye amakhilomitha angama-70,000 - sisonke sakha ugu lolwandle oluyinkimbinkimbi kakhulu emhlabeni.
I-Museum Kitchen eMnyuziyamu kaZwelonke waseNigeria eLagos yindawo enhle yokuzama ukudla kwaseNigeria kwendawo.
Indawo eseBromo-Tengger-Semeru National Park ngaphakathi nasezindaweni ezizungezile ihlalwa amaTenggerese, ongomunye wemiphakathi yamaHindu ambalwa asele esiqhingini saseJava.
IFort Meigs ePerrysburg, e-Ohio inqaba enkulu kunazo zonke ebiyelwe ngokhuni eNyakatho Melika futhi yabamba iqhaza elikhulu empini yango-1812.
UMeyi Kedem eCarmel Range yisidlanzana esingaphansi komhlaba esingahamba ngokuhamba komhlaba esivela enkathini yaseByzantine, esasisetshenziselwa ukunikeza idolobha laseKesariya futhi namanzi namanje ahamba.
IChiclayo nezindawo ezizungezile zibonisa izinto ezihlobene ne-Lord of Sipan, i- "King Tutankamon of the Americaas", kufaka phakathi elinye lamathuna amangalisa kakhulu atholakala ku-Western Hemisphere.
IHhovisi Langaphambili le-Utrecht Main Post liyisibonelo esihle sokwakhiwa kweDutch Art Deco.
IGujarat yisimo esihle kakhulu esithandekayo esimangazelayo i-Indophile eyaziyo, futhi iveze amagugu afihliwe ezinhlokini zezivakashi.
ECarolina Tiger Rescue ePittsboro ungabona amahlosi, amabhubesi, izingwe kanye namanye amakati amakhulu, wonke asindisiwe ekuphathweni kabi futhi alethwa lapho.
I-Lightning Ridge inezinto eziningi ezihlobene nama-opals nezimayini.
I-squamish izibiza ngeDolobha Lezokungcebeleka Langaphandle laseCanada ngenxa yemisebenzi eyahlukahlukene etholakala endaweni.
Ngenkathi utshwala bungatholakali kabanzi noma bubonakala e-Algeria, kukhiqizwa ukukhethwa kwewayini (hhayi ngevolumu enkulu) nobhiya kukhiqizwa lapho.
ISchifffahrtsmuseum Spitz izinikele ekuboniseni umlando kanye nentuthuko yezithuthi zasolwandle emfuleni iDanube.
I-Yamaguchi Daijingu yakhiwa ngeNkathi kaMuromachi njengendawo yesakhiwo segatsha ye-Ise Shrine, futhi njengasekupheleni yakhiwa njalo eminyakeni engama-20.
IMilwaukee yake yaba yikhaya emizini emine enkulu kunazo zonke emhlabeni, okwenza kwaba ubhiya wokuqala okhiqiza ubhiya emhlabeni iminyaka eminingi.
I-Chom Ong Cave ngaphandle kweMuang Xay inika isivakashi umuzwa omnandi wokungena kaTolkien's Mines of Moria.
Ukugujwa kosuku lukaSt. Patrick e-Savannah kubhekwa ngabaningi njengeqembu lesibili ngobukhulu e-US
Indawo enkulu ekhiqiza iwayini eJalimane, iRhineland-Palatinate iyikhaya lezifunda ezi-6 kwezingu-9 ezikhiqiza iwayini ezweni.
IPunta del Este kwesinye isikhathi ibizwa ngokuthi Monaco yaseNingizimu Melika.
Ajman I-Fish Market iyindawo enhle ukubona abadobi bekhipha ukubanjwa okusha futhi babuke indali yophawu olubhekiswa kubo kubathengi bezitolo futhi ungathenga izinhlanzi bese ulupheka lapho.
Eminyakeni yokuqala yo-1970 abasemuva bokuqala ababehamba ngemuva kwesikebhe sikakhukhunathi bafika eKo Samui, manje indawo yesibili yesiqhingi ethandwa kakhulu Thailand.
IGeghard Monastery eseGarni iyifa eligodliwe emhlabeni wonke, yahlonishwa isigodlo sekhulu le-11, iningi laso laqoshwa etsheni eliqinile elisezintabeni, esimweni esimangalisayo somakhonya.
ICastello di Sasso Corbaro yakhiwa ngezinyanga eziyisithupha kuphela ngo-1479, amamitha angama-462 ekhuphukeni egqumeni, njengokwakhiwa okuphezulu kakhulu eBellinzona.
Isibonakaliso esikhulu, esinezimpawu zokuzithokozisa phambi kwesihloko se-Facebook eMenlo Park sikhulu kakhulu kuma-selfies, kodwa cishe kuzoba nezivakashi ze-geek ezizothatha isithombe sakho.
IShiono-Misaki eseningizimu nePaki ePaki eKushimoto ichaza iphuzu eliseningizimu impela yeHonshu futhi isebenza njengezizathu zomkhosi woMkhosi woMlilo waminyaka yonke.
Namuhla umnyuziyamu nokuheha izivakashi, iRobben Island edume kabi yasetshenziselwa ukubopha abantu kusukela ngo-1658.
ILjubljana ayinazo izinto ezidumile zomhlaba, okuyinto enhle nje: asikho isidingo sokwehla usuka kwenye indawo uye kwenye, uthatha izithombe bese weqa izinto ohlwini lwakho.
ICité de Carcassonne iyinqaba yangezikhathi zasendulo enezindonga ezingaphezu kuka-3 km ezinemibhoshongo engama-52 nomlando odlula iminyaka eyizinkulungwane ezimbili nengxenye.
IJiageng Park eJimei ibizwa nangokuthi iKah Kee Park ekhumbula uTan Kah Kee (Chen Jiageng), oyisigqoko senjoloba owenze imali enkulu eMalaya.
I-Antique Boat Museum eseClayton ifaka nethuba lokugibela abagibeli abathathu eSt Lawrence Skiff.
E-Oxley Wild Rivers National Park kunezimpophoma eziningana ezimangazayo.
Ihholo Ledolobha laseZamboanga laqedwa ngo-1907 yi-Federal Hulumeni yaseMelika kubaHulumeni baseMelika ngaleso sikhathi.
I-Taxi-brousse, noma itekisi elihlanganyelwana ngayo, iyindlela iningi labantu bendawo elihamba ngayo Madagascar, futhi le ndlela yokuhamba iyindlela enhle yokuhlangana nokuxhumana nabantu bendawo kanye nokuhlangenwe nakho kweMadagascar njengoba kwenza amaMalagasy.
Isonto iNyanga e-Oradea liyisonto elihlukile eYurophu, nohlobo lwewashi lezinkanyezi elibonisa izigaba zenyanga.
I-Bandstand in MumbaiIzindawo ezingasentshonalanga zaseNtshona zakhiwe ngama-bungalows abizayo namaflethi, amanye awo angawezinkanyezi ze-Bollywood movie.
IShetland iyathakazelisa kakhulu kumuntu wemvelo nanoma ngubani othambekele ukubona izilwane zasendle nezinyoni endaweni yazo yendabuko.
IMerzouga iyidolobhana elisogwini lwe-Erg Chebbi, olungamakhilomitha angama-50 ubude futhi olungamakhilomitha ayi-5 ububanzi izindunduma zesihlabathi ezifinyelela kufinyelela ku-350 m.
I-Orquídeas Moxviquil eSan Cristóbal de las Casas ikhulisa ama-orchid nezinye izitshalo ezihlengwa ezindaweni eziseduze nokuqothulwa kwamahlathi, futhi izinikele ekugcineni nasekuboniseni zonke izinhlobo zama-orchid asendaweni yesifunda saseChiapas.
IDepoe Bay idume njengechweba elincanyana elikwazi ukuhamba emhlabeni, futhi “njengenhloko-dolobha yomhlaba wonke yokubuka.”
I-draeduct yakudala e-Évora inezindlu ezakhelwe ngaphakathi kwizakhiwo.
I-Alto Ribeira State Touristic Park iyindawo ehamba phambili yokuhlola umhume, equkethe umhume waseGruta da Casa da Pedra, onomlomo omkhulu womhume emhlabeni.
EKenting National Park ungabona isithombe esibonisa ithiphu eliseningizimu impela Taiwan - edumile ngabantu bendawo ngezithombe nendawo enhle yokushona kwelanga.
Isiphuzo esithambile sikaDkt Pepper sakhiwa eWaco ngonyaka we-1885 kanti imnyuziyamu kaDkt Pepper isigcina isitshalo sokuqala samabhodlela.
Lapho nje isizinda semikhumbi esatshwayo (amakhorali), esiqiniselwe kakhulu ukuhlaselwa iNorman (noma isiNgisi), iSanta-Malo yanamuhla ingesinye sezivakashi ezihamba phambili eBrittany.
Okungaphakathi Mongolia Imyuziyamu eseHohhot ikhombisa izitshalo zasekhaya, iziloba nomlando kusukela esikhathini samatshe kuze kube sezikhathini zanamuhla, kanye namaminerali kanye nokumbiwa phansi, ukuhlola isikhala, kanye nama-dinosaurs.
Amakamelo ambalwa e-rocket-rocket steeters asuka ethekwini lomfula iDhaka's Sadarghat aye eBarisal naseKhulna kaningana ngeviki.
ICerro Catedral ngaphandle kweSan Carlos de Bariloche inesikhungo esikhulu kunazo zonke esiseNingizimu Melika, esinendawo ezungeza amanzi ebangeni elingamakhilomitha ayi-2 (0.77 sq mi), ngaphezu kwamakhilomitha ayi-100 (amamayela angama-62) ukushibilika koshibhile, kanye nokuphakama kwabasiki be-22,200 ngehora.
ICastormaine inomlando oziqhenyayo wezimoto, futhi iyona eyazibiza nge 'Hot Rod Capital' yaseVictoria.
ICocaa-Cola enkulu kunazo zonke emhlabeni, eyakhiwa embhoshongweni wamanzi wakudala, ingabonakala ePortage la Prairie.
Yize ingakhuli kancane, iMyanmar iyabiza uma iqhathaniswa namanye amazwe aseNingizimu mpumalanga ye-Asia.
Inganekwane ithi iHarry's New York Bar ekuhlelweni kwesi-2 eParis kwakuyindawo yokuzalwa kukaMagazi oMary owasungulwa nguFernand “Pete” Petiot, umbhali wase-America
UPapa Alexander IV wangcwatshwa eViterbo Cathedral kodwa ithuna lakhe labhujiswa ngokungafanele ngesikhathi sokuvuselelwa komhlaba ngekhulu le-16.
AbaseYurophu bokuqala ukuhlala ePuerto Madryn kwakuyiWelsh abafika ngo-1865, futhi baqamba leli dolobha ngokuthi iBaron Madryn yaseWales.
Indawo yokudlela yaseCity Of Sadness eJiufen yaboniswa kwifilimu enegama elifanayo, eyathola umklomelo weGolden Lion ku-1989 Venice Film Festival.
Futhi iNorth Pole eNew York inepaki yengqikimba yeSanta noKhisimusi ngokuzijabulisa, ukugibela nezitolo.
Kusuka engqungqutheleni yentaba ephakeme kakhulu yaseSle of Man, iSnaefell, kuthiwa izivakashi zingabona amaBuso ayi-6 - IScotland, I-England, Wales, i-Ireland, i-Isle of Man neZulu.
Yakhelwe kunqaba yakudala eyakhiwe ekuqaleni kwekhulu lama-20, i-Al Wakrah Museum ibonisa ubuciko bempilo yasolwandle nomlando wendawo.
Ngokungafani neningi leFrance, i-Hauts-de-France yaziwa kangcono ngebhiya yayo kunewayini.
I-Avarua iyidolobhana elisenyakatho neRarotonga futhi inabantu abaningi kanye nezinsizakalo - abantu bavame ukuyibiza ngokuthi lidolobha.
Isikhumulo semikhumbi iPidjiguiti eBissau kwakuyindawo yokubulawa kwabantu kwasePidjiguiti ngomhlaka 3 Agasti 1959, okwaba yisiqalo sokumelana okusebenzayo ngokumelene nombuso wamakoloni wamaPutukezi.
Ngenkathi isipelingi saseTibetan ngolimi olubhaliwe sisezingeni elijwayelekile kuyo yonke iminyaka nezindawo, ukuphinyiselwa kwehlukahluka kakhulu futhi kunezindlela eziningi, ezivame ukungaqondakali, zezilimi.
AmaCyclade yilawa Greece yezingqwembe zokuvakasha: iziqhingi ezingenamadwala ezihlotshiswe ngemizana emhlophe ebabazekayo ebonakala emagqumeni ngaphezu kolwandle olumnyama-omnyama, futhi inamabhishi aminyene.
UPenguin waqanjwa ngama-penguin amancane ayevame ukuzulazula emabhishi alo, futhi izinto eziningi lapho, kufaka namabhinisi, zakhiwe njengamaphinifa.
INagpur ingabhekwa njengendawo ephakathi neNdiya njengoba ingqophamlando eyi-zero yaseNdiya itholakala edolobheni.
UChaozhou uzithatha njenge "Ceramic Capital of China" futhi uzokwazi ukuthi kuningi okuthengiswayo okuthengiswayo, okuvame ngamanani ashibhile kakhulu.
Le boardwalk yemayela elingamamayela amabili nesigamu igxile ekuheheni kwe-Ocean City - kugcwele izitolo nezindawo zokudlela zazo zonke izinhlobo, izinkundla zemidlalo yama-movie, ukugibela izindawo zokuzilibazisa, amabala egalofu amancane, nepaki yamanzi njengokunye.
IKelimutu eduzane ne-Ende iyintaba engcwele enamachibi amathathu ama-crater, agcwele amanzi anemibala ehlukene.
Ukuheha okuthandwayo e-Awasa yimvubu - kungabonakala ogwini lweLake Awasa, noma kusuka esikebheni.
IStratford-upon-Avon yaziwa kakhulu njengedolobha lasekhaya lomdlalazi omkhulu nesiNgisi, uWilliam Shakespeare.
ILoveland, iColorado yasungulwa ngo-1877 eduze noColorado Central Railroad futhi yaqanjwa ngumongameli wale nkampani, uWilliam AH Loveland.
Intaba-mlilo ibhekwa njengesebenzayo uma ivele yaqhuma phakathi neminyaka eyizi-10,000 eyedlule - ngaphansi kwesibili ngesikhathi sokuma komhlaba.
Isonto iSt. Mark's eZagreb laziwa ngamathayili alo ophahleni anemibala efanekisela ijazi lezingalo zaseCroatia neZagreb.
IMyuziyam yaseBeilin eseXian iqoqo elimangalisa kakhulu lamathebhuleni amatshe ayi-4000 abhalwe phansi, umlobi ongokomfanekiso, izinkondlo, imibhalo yaseChinese esezingeni eliphakeme, ukunqoba kwababusi, umlando womndeni kanye nezindaba ezisebenzayo ezifana nemiyalo yokwakha kabusha isikole.
IPonta do Seixas eJoão Pessoa iphuzu elisempumalanga yezwe eMelika - kunesikhumbuzo sesikhumbuzo sendawo leyo, kanye nesibane sombane esingajwayelekile esakhiwe u-Oscar Niemeyer, futhi sinombono oshaqisayo we-Atlantic.
Yaziwa njengethempeli elidala kunawo wonke emhlabeni, futhi labhalwa ngo-9000 BCE, iGöbekli Tepe ngaphandle kwase-Urfa ngaphambi kokulima nezindawo zokuhlala.
IFisheries Museum yase-Atlantic eLunenburg isikhumbuza isiko lokudoba lase-Atlantic Canada, futhi imibukiso ifaka phakathi imikhumbi, i-aquarium enezinhlobo zabomdabu, kanye nesitolo sokwakha izikebhe esisebenzayo.
Isikhungo sendawo yeNew York City siseQueens.